စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည့်ဖျားနာခြင်း၊ ဆေးပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်း - ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014 ဇူလိုင် 17; 5: 83 ။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2014.00083 ။ eCollection 2014 ။
Lijffijt M က1, ဟူ K သည်2, Swann AC အ3.
Marijn Lijffijt,1,* Kesong ဟူ,2 နှင့် အလန် C. Swann1,3
ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကလေးဘဝအထပ်ထပ် / နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုစွဲနာမကျန်း-သင်တန်းငါးခုအဆင့်ဆင့်ထိခိုက်ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်ကြောင်း: တ္ထုများနှင့်အတူ (က) ကနဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်; (ခ) ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှစမ်းသပ်ရာမှရွှေ့ပြောင်း; (ဂ) အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ်မှီခိုဖို့ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်တင်းမာမှု; (ဃ) ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှု; (ပြန်လည်) လြော့နညျးသှားနှင့် (င) အန္တရာယ်။ ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စွဲနာမကျန်း-သင်တန်းအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်လူ့စာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကလေးဘဝအထပ်ထပ် / နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှိုင်းယှဉ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိ (ဈ) နှင့် (ii) သက်ရောက်မှုများအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏အတန်းကိုဖြတ်ပြီးဖြတ်ရှိမရှိကျနော်တို့နာမကျန်း-သင်တန်းဇာတ်စင်နှုန်းစူးစမ်း။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဖိအားကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားတွေအတွက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်မှီခိုရာအဘို့နာမကျန်း-သင်တန်းအဆင့်ဆင့်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်အလားအလာရှိသောနောက်ခံယန္တရားများဆွေးနွေးပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများနှစ်ဦးစလုံးစိတ်ဖိစီးနှင့် dopaminergic လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များနှင့်ကလေးဘဝကိုစိတ်ဒဏ်ရာကိုသက်ဝင်နဲ့ post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များကိုပိုမိုနာတာရှည်ဖြစ်ကြပြီးတ္ထုများကိုအသုံးပြုဖို့သူကလူကိုပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဖိအားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုရိုကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများထိခိုက်နေဖြင့်အလားအလာအစောပိုင်းအသုံးပြုမှုကိုအစပျိုးရန်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်။ ဖိအားလည်းအထူးသဖြင့်ာင်းဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့နေသောအဆင့်မြင့်ရို Impulse နှင့်အတူလူအတွက်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများနှင့်အတူ Cross-မလွဲမသွေကြောင့် dopaminergic လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များာင်းအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ကြိုတင်သက်ရောက်မှုမှအလားအလာပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှအကူးအပြောင်းအရှိန်မြှင့်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖိအားဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှု attenuate, အလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုမှုအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်နှင့်အချက်လွှတ် corticotropin ဖွငျ့ကြောင့် amygdala ၏ာင်းမှအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ရန်အပြုသဘောအနေဖြင့်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီအသုံးပြုပုံနှင့်တိုးမြှင့်ာင်းအသုံးပြုပုံစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များပိုမိုပြင်းထန်လာာင်းနေဖြင့်အလားအလာ relapse အန္တရာယ်တိုးမြှင့် noradrenergic စနစ်များ။ စိတ်ဖိစီးမှုယေဘုယျအားဖြင့်ဖိအားအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးနှင့်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏အတန်းကိုဖြတ်ပြီးစွဲနာမကျန်း-သင်တန်းသက်ရောက်သည်။
keywords: စိတ်ဒဏ်ရာ, စိတ်ဖိစီးမှု, စွဲလမ်း, norepinephrine, HPA ဝင်ရိုး, Impulse, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, သတိထား
စွဲလမ်းများအတွက်ဆက်လက် compulsive လိုအားဖြင့်မှတ်သားခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း, mood- နှင့်စိတ်ကို-ပြောင်းလဲတ္ထုများအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းသို့မဟုတ်အလေ့အထကိုပြောင်းလဲလိုသည်။ 2014-2015 ခုနှစ်, အကြမ်းဖျင်း 31 သန်းကိုအမေရိကန်လူကြီးများနီကိုတင်း [Ref စွဲပါလိမ့်မည်။ (1); ] 2014 အမေရိကန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေမှစီမံကိန်းနှင့်အသက်အရွယ် 18 နှင့် 7.5 အကြား 12 နှင့် 50 သန်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ Ref [မှအသီးသီး, အရက်နှင့်တရားမဝင်တ္ထုများစွဲပါလိမ့်မည်။ (2), p ။ 76] ။ သို့သော်တ္ထုများနှင့်အတူစမ်းသပ် start သူကိုလူအများစုစွဲဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ထိုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဘယ်ကြောင့်အချို့သောဖြစ်နေဆဲ, ဒါပေမဲ့တခြားမဟုတ်, လူတွေကိုပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းဖွံ့ဖြိုး။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းကလေးဘဝသို့မဟုတ်အထပ်ထပ် / နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များစဉ်အတွင်းပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များသည်ဤအားနည်းချက်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ (လျစ်လျူရှု; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှု) ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့် Post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏အတန်းကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူအတွက်တိုးမြှင်နှင့်ကလေးဘဝကိုစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ် Post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုပစ္စည်းဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်တိုးပွါးနေပါတယ် ပုံမမှန် (ကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်အသုံးပြုနိုင်သည်3-23) ။ စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်ခြင်း, အလွဲသုံးစားမှု, ဒါမှမဟုတ်မှီခိုအရင်အဦးနေရာနိုင်24), ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလည်း (အပိုဆောင်း) စိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များ (ရန် predispose နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားတစ်ဦးအလားအလာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးအကြံပြုခြင်း25).
စိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်းမရှိဘဲလူကြီးများပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါများအတွက်စံတွေ့ဆုံလူကြီးများ (အကြားသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနှိုင်းယှဉ်, တစ်ဦးသို့မဟုတ်နည်းပါးလာနှစ်ပတ်လည်အဓိကစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များပျမ်းမျှ26, 27), စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ဖိအားလူများ၏အရေအတွက်သည်တစ်ဦး function ကိုအဖြစ်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြင်းထန်မှုအတွက်အလားအလာရှိသောနောက်ထပ် gradation နှင့်အတူကြုံတွေ့ခဲ့ကြ (28) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်အတူလူမှာ Post-ကလေးဘဝဖိအား (အဓိကအားဖြင့်, ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေရေးရာ, လူမှုရေး, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်ခဲ့ကြသည်26, 27), သူတို့ကပိုနာတာရှည်ဖြစ်နှင့်စွဲလမ်း၏အကျိုးဆက်များမှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုမမှန်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာပေးဖို့ဖိအား, အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏အတန်း, ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းနာမကျန်း-သင်တန်းအဆင့်ဆင့်အမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်ဆံရေးကိုတစ်ဦးစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုချို့တဲ့သည်မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်ပေမယ့်။ ငါဎဤသုံးသပ်ချက်ကိုကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုအဓိကစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များပေါ်တွင်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်အမူအကျင့်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုယန္တရားအပေါ်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ၏သက်ရောက်မှုဆွေးနွေးပါ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုထပ်ခါတလဲလဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်သက်ရောက်မှုဆင်တူသည်။
Next ကိုကျနော်တို့လူ့ဖိအားအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တင်းမာမှုကြားကဆက်ဆံရေးအပေါ်စာပေ (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကလေးဘဝအထပ်ထပ် / နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ) နှင့်တ္ထုများ၏အတန်း (နီကိုတင်း, အရက်, ဆေးခြောက်, ကိုကင်းအခြားစိတ်ကြွဆေးဖြတ်ပြီးပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, opiates, sedatives နှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် hallucinogens) စွဲနာမကျန်း-သင်တန်း၏ငါးအဆင့်ဆင့်၏တစ်ဦးချင်းစီအဘို့: (က) စတင်, ဒါမှမဟုတ်၏ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း, တစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာ; (ခ) ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှစမ်းသပ်ရာမှပြောင်းကုန်ပြီ; (ဂ) အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ်မှီခိုဖို့ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်တင်းမာမှု; (ဃ) ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှု; (င) relapse ။
အလားအလာရှိသောမော်ဒသို့မဟုတ်ပြုပြီ (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ, တဏှာ, ဒါမှမဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာကိုအကျိုးသက်ရောက်) နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုကျနော်တို့လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ဖျော်ဖြေလေ့လာမှုများအပေါ်မှီခိုရာအဘို့နာမကျန်း-သင်တန်းကိုထိခိုက်ခြင်း, တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်များစေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်အလားအလာရှိသောယန္တရားများတင်ဆက်ထားပါတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုစင်ပေါ်မှာအဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ ဇာတ်စင်နှုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အကြောင်းအရာများပုံအတွက်တင်ပြကြသည် Figure11.
စိတ်ဖိစီးမှု ( "တစ်ခုသက်ရှိများ၏စည်းမျဉ်းစွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်" ဆိုခန့်မှန်းရခက်သို့မဟုတ်မထိန်းချုပ်အဖြစ်အပျက်ကိုရည်ညွှန်းသည်29), နှင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ရှိရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသမာဓိရှိခြိမ်းခြောက်နိုင် (30) ။ acute စိတ်ဖိစီးမှုယာယီအသီးသီး glucocorticoids (ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်လူသားများနှင့် corticosterone အတွက် cortisol) နှင့် norepinephrine (တိုးပွားလာခြင်း, pituitary-adrenal hypothalamic-(HPA) နှင့်စာနာ-adrenal-medullary (SAM) ပုဆိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်31ခန္ဓာကိုယ်ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်အောင်), နောက်ပိုင်းတွင် (အခြားယန္တရားများကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ်ဟန့်တား32).
Tသူကအာရုံခံအချက်လွှတ် corticotropin ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် HPA ဝင်ရိုးကိုသက်ဝင် brainstem အရေးပါ, အာရုံခံ cortical, amygdala တို့နှင့် prefrontal cortex, (CRF) မှစီမံချက်များနှင့်မိုင်နိုအက်စစ် vasopressin (AVP) ကနေတဆင့်ဖိအားအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တို့ကိုစုဝေးစေသည့် hypothalamus ၏နျူကလိယ (PVN) paraventricular (33-36). AVP အားဖြင့် potentiated CRF, အလှည့်အတွက် glucocorticoid ရရှိနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ adrenal cortex အချက်ပြလိုက်ခြင်းသော anterior pituitary က adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း; glucocorticoids HPA ဝင်ရိုး activation တားစီးဖို့ဦးနှောက်အချက်ပြခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိ (33, 37-39).
အဆိုပါ HPA တုံ့ပြန်မှုကို (hippocampus အားဖြင့်လည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်40-42), အ medial prefrontal cortex (43, 44), နှင့် amygdala (45) ။ Deactivate ဒါမှမဟုတ် cortisol တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်သည် hippocampus, ဒါမှမဟုတ် anterior cingulate cortex နှင့် amygdala ၏တိုးမြှင့် activation ၏လျော့လည်ပတ်ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက် HPA ဝင်ရိုး၏ချို့ယွင်း reactivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောပြီ (41, 46). အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ (ဖိအားအဖြစ် HPA ဝင်ရိုး activation အပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှုရှိ47), shared ယန္တရားများအကြံပြုခြင်း.
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) အပါအဝင် Dopaminergic ယန္တရားများ, အလွဲသုံးစားမှုလူတန်းစားအားလုံး၏သို့မဟုတ်တ္ထုများအနှံ့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးနှင့်စွဲလမ်းရှုထောင့်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထင်နေကြသည်။ ကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှု, Leyton (ခုနှစ်တွင်48) acute အုပ်ချုပ်ခွင့်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးတ္ထုများ, striatal extracellular dopamine တိုးမြှင့်ကြောင်းပြပြီး, ပိုမိုနှစ်သက်သည်သို့မဟုတ်တ္ထုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုး / အကြိုးသက်ရောက်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတိုးလာ dopamine, (မူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုမှ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်နှင့်တ္ထုများလောင်ချင် compulsive48) ။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအဆုံးစွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွဲနာမကျန်း-သင်တန်းနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဆက်လက်ရှိနိုငျသော dopamine receptors ၏ထပ်ခါတလဲလဲဆွမှုကြောင့် striatal ယန္တရားများ, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုဖို့ဆုလာဘ်စနစ်များာင်းမှဦးဆောင် (မက်လုံးပေးာင်း) ၏အာရုံကြောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဆက်စပ်နိုင် နှစ်ပေါင်းများစွာ (49) ။ အသိမြှကြောင်းကြိုတင်အသုံးပြုမှု (၏တင်းမာမှု) ဤတုံ့ပြန်မှုကျလာသောခဲ့ပါဘူးမှတ္ထုများ၏ဆေးများမှအလွန်အကျွံမော်တာသို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ အသိ (ပင်နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာ၏အသုံးပြုမှုကိုအပြီး relapse များအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်နိုင်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကြောင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစွဲတူသောပုံစံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်48).
စိတ်ဖိစီးမှုအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများအဖြစ် striatal dopamine စနစ်များအပေါ်နှိုင်းယှဉ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ CRF နောက်ပိုင်းတွင် dopamine ်အာရုံခံသက်ဝင်ခြင်း, VTA အတွက် glutamatergic ဆဲလ်အပေါ် CRF-2 receptors မှ binding အားဖြင့် striatal ဒေသများရှိ dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါး (50, 51) ။ လူသားများတွင်စူးရှသောမထိန်းချုပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု [11 လျော့နည်းသွားC] သ ventral putamen နှင့် NAc (အပါအဝင် ventral striatum အတွက်အလားအလာ binding raclopride52), စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာတိုးမြှင့် striatal extracellular dopamine ညွှန်ပြ။ ဤ (ဖိအားများနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အတွက်ရရှိလာတဲ့, စိတ်ဖိစီးမှုဆုလာဘ်စနစ်များ sensitize ခွင့်ပြု53) ။ [11 အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုသိသာလျှော့ချရေးနှင့်ပတ်သက်သောဖိအားကပိုသိသာ cortisol reactivity ကိုC] (အဆင့်မြင့်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှင့်အတူလူအတွက်ဆုလာဘ်ယန္တရားများအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသိသာအကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြုခြင်း, binding raclopride52).
ဖိအားကိုလည်း (ထို locus coeruleus ထံမှ norepinephrine ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်, CRF အချက်ပြခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၌, SAM ကိုဝင်ရိုးကိုသက်ဝင်54-56) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် norepinephrine လွှတ်ပေးရေး (ထိုတိုကျရိုကျ cortex အတွက် norepinephrine ရရှိနိုင်မှု elevates57, 58), α1-adrenergic receptors ရေလွှမ်းသဖြင့် prefrontal လုပ်ငန်းဆောင်တာများလည်းပြတ်တောက် (54), နှင့်အဆင့်မြင့် norepinephrine reactivity ကိုနှင့်အတူလူအတွက်တုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောတိုးမြှင့် (59). စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်အနုတ်လက္ခဏာ (စိတ်လှုပ်ရှားမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိခိုက်နိုင်54, 59, 60), လေ့သွေးဆောင်ထက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ (61စိတ်ခွန်အားနိုးသတင်းအချက်အလက်), နှင့်ဘက်လိုက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ (62-64).
အလွဲသုံးစားမှုဖိအားများနှင့်တ္ထုများနှစ်ဦးစလုံး (စိတ်ဖိစီးမှုယန္တရားများကိုသက်ဝင်47). ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် activation ဝင်ရိုးထပ်ခါတစ်လဲလဲဒါမှမဟုတ်နာတာရှည် HPA ချို့ယွင်းစိတ်ဖိစီးမှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ (အာရုံချို့ယွင်း HPA ဝင်ရိုး activation) သို့မဟုတ်တာရှညျတုံ့ပြန်မှု (တားစီးဝင်ရိုးချို့ယွင်း HPA) အပါအဝင်တုံ့ပြန်မှု, နှင့်အတူတူပင်ဖိအားများအထပ်ထပ်မှ HPA ဝင်ရိုးလေ့တစ်ခုမရှိခြင်းစနေိုငျ (32) ။ norepinephrine နှင့် epinephrine အထပ်ထပ်နှင့်အတူ habituate ဘူးသော်လည်းတူညီသောဖိအားထပ် (ACTH နဲ့ Cortisol ၏လွှတ်ပေးရန် attenuates31) ။ စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ (အထူးသဖြင့်စိတ်ကျရောဂါပိုပြီးရောဂါလက္ခဏာရှိသူများအတွက်လူသားများအတွက် HPA ဝင်ရိုး reactivity ကိုတိုးမြှင့်နိုင်65).
medial prefrontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချကြွက်များတွင်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (66), ဖြစ်နိုင်သည် medial prefrontal cortex အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအရောက်တွင်အားဖြင့် (67), ဧရိယာလူ့ HPA စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိ်ပတ်သက်နေ (33) နှင့်, စိတ်ခံစားမှုလူ့သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု (68, 69) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex အပေါ်အလားတူသက်ရောက်မှု prefrontal လုပ်ငန်းဆောင်တာ impairing, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာအဘို့အတွေ့ပါပြီ (70).
ထို့အပြင်အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာ, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသောဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းနောက်ထပ် VTA နှင့် NAc dopamine ဆဲလ်အပေါ် excitatory synapses ၏ Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်များာင်းပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ် (71). Amygdala လှုပ်ရှားမှုတိုးလာစိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်-သွေးဆောင်အပြုအမူအားဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်ရာထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လည်းတိုးလာနိုင်မည် (32), နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကနဦးအဆင့်များတွင်လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုအားဖြင့်မောင်းနှင်သောအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ရန်အပြုသဘောအားကောင်းရာမှစွဲလမ်း၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်အတွက် CRF-သွေးဆောင်ပြောင်းကုန်ပြီအသုံးပြုပုံပေမယ်နာမကျန်း-သင်တန်းနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်ဆုတ်ခွာ-related သက်ရောက်မှုများက (45, 72). ဤသည်ပြောင်းကုန်ပြီစွဲနာမကျန်း-သင်တန်းနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် HPA ဝင်ရိုး activation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အစောပိုင်းအဆင့်ဥစ္စာ-သွေးဆောင် HPA ဝင်ရိုး activation ဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ် (45, 72, 73). နောက်ဆုံးတွင် noradrenergic တုံ့ပြန်မှုစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများအားဖြင့် locus coeruleus ၏အထပ်ထပ်သို့မဟုတ်နာတာရှည် activation အားဖြင့်ထိခိုက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတုံ့ပြန်ဖြစ်လာပေမည် (37, 74, 75), အလားအလာ (prefrontal လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် norepinephrine လွှတ်ရာအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်55).
ထို့ကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု, အစောပိုင်းကဖြစ်ပေါ်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တ္ထုများကိုအသုံးပြုဖို့သူကလူတို့တွင်ပိုပြီးနာတာရှည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစောပိုင်း, စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်တ္ထုများအားဖြင့်နာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲ HPA သို့မဟုတ် SAM ကို activation, စိတ်ခွန်အားနိုးစိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစနစ်များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းဖို့လူ predispose လိမ့်မည်။ (က) စတင်, ဒါမှမဟုတ်၏ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲခြင်းနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ; Next ကိုကျနော်တို့စွဲနာမကျန်း-သင်တန်း၏ငါးအဆင့်ဆင့်၏တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်လူ့စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ရန် (ခ) ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှစမ်းသပ်အသုံးပြုမှုကိုကနေပြောင်းကုန်ပြီ; (ဂ) အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ်မှီခိုဖို့ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်တင်းမာမှု; (ဃ) ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှု; (င) relapse ။ ငါတို့သည်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုနာမကျန်း-သင်တန်းအဆင့်ဆင့်မှအကူးအပြောင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့သူအကြံပြုချက်များစေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်အလားအလာရှိသောမော်ဒသို့မဟုတ်ပြုပြီ, ပစ္စုပ္ပန်ယန္တရားများဆွေးနွေးပါ။
အဆိုပါစွဲ Cycle ၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများ
အချို့သောလူများအတွက်, စှဲကလေးဘဝသို့မဟုတ်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မကြာခဏဖြစ်သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာ, (ကိုသုံးပါ (သို့မဟုတ်ကြိုးစား) ဖို့ကအရမ်းပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းမှာ start76, 77) ။ အကြမ်းဖျင်း 6400 ကလူပထမအကြိမ်ဆေးရွက်ကြီးကိုအသုံးပြုဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ Daily သတင်းစာ, 12,600 လူတွေကိုအရက်၏အသုံးပြုမှုကိုအစပျိုးနှင့် 7900 လူတွေတရားမဝင်တ္ထုများအသုံးပြုမှုအစပျိုး; ဤလူများ၏ထက်ဝက်ခန့် 12 နှင့် 18 အကြားရှိပါတယ် (အသက်အနှစ်2).
ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ (တ္ထုများကြိုးစားရန်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်78) နှင့်ကလေးဘဝ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းစီးကရက်, အရက်, ဆေးခြောက်, ကိုကင်းနှင့်အခြားစိတ်ကြွဆေး, opiates နှင့် sedatives ၏အသုံးပြုမှုကိုအစပျိုးဖို့မြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပြီး (28, 78-86) နှင့်အရက်, စိတ်ကြွဆေး, opiates, ဒါမှမဟုတ် sedatives အသုံးပြုမှုများအတွက်စတင်ခြင်း၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှတွေ့ကြုံခံစားဘူးသောလူထက် (13, 87-90) သို့မဟုတ်သူကိုလျော့နည်းပြင်းထန်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာတွေ့ကြုံ (91) ။ ဤရွေ့ကားအန္တရာယ်များ (လူကြီးသို့မွငျ့မားကျန်ရစ်82), မခွဲခြားဘဲလိင်ဆက်ဆံမှု၏ (87), လူကြီးများအဖြစ်မဲ့ဖြစ်စေသည်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သောပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် (92) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်အချို့သောလေ့လာမှုတွေ (ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်အရက်၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်တစ်သက်တာအသုံးပြုမှုကိုအကြားအဘယ်သူမျှမဆက်ဆံရေးကိုတွေ့93မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအကြားတွင်ဆေးခြောက်), ကိုအသုံးပြုခြင်း (94), သို့မဟုတ်တ္ထုများအမျိုးမျိုးအတန်းကိုဖြတ်ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အစောပိုင်း Initiative (25) ။ ဒါကအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှု (အစား, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမြင့်မားသောအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာလူတွေကို predispose စေခြင်းငှါ, ကြောင်းအစီရင်ခံ25) ဒီအသာဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုသူတစ်ဦး subsample အကြားစစ်မှန်တဲ့ကိုင်နိုင်ပေမယ့်။
post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များလည်းတ္ထုများအမျိုးမျိုးအတန်း (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော) စတင်နှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များသည်သေခြင်းသို့မဟုတ်အလေးအနက်နာမကျန်းမိသားစုဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ၏, နေရာပြောင်းရွှေ့, ပစ်ခတ်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားကြ၏ခံတစ်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းတစ်ခုသူဌေးသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်, ခွဲခြာ, ကွာရှင်းသို့မဟုတ် Break-တက်နှင့်အတူဒုက္ခ, မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူပြင်းထန်သောလူ့ strain ပါဝင်နိုင်ပါသည်, အိမ်နီးချင်းသို့မဟုတ်ဆွေမျိုး, ဥပဒေ-ဘက်တော်သားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်များသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုများ၏သားကောင်ဖြစ်ခြင်း (95) ။ အချို့လေ့လာမှုများလည်းအိမ်, ကျောင်း, သို့မဟုတ်အလုပ်မှာမထိန်းချုပ်နေ့စဉ်ကူညီပြီး, ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ ကျနော်တို့ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်သမျှတိကျတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအတန်းများအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လေ့လာမှုများမကြာခဏ "(တရားမဝင်) မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ " ဟုအဆိုပါခေါင်းစဉ်အောက်မှာအတူတူအတန်းဆွဲထုတ်ခဲ့ကြ
School- သို့မဟုတ်မိသားစု-related စိတ်ဖိစီးမှုဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ပါဘူးသူကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြားဆေးလိပ်သောက်စတင်ရန်တစ်ဦးမွငျ့မားသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (5) နှင့်စတင်ဆေးလိပ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား (မိဘအလုပ်အရှုံးအသုံးပြုပုံတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်96), (ကျောင်းတွင်ပြဿနာများတိုးပွားလာ97), အနိမ့်မိဘလူမှုရေးစီးပွားရေးအဆင့်အတန်း (98), နှင့်မွငျ့မားရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှု (7, 99) ။ ဓာတ်လှေကားစိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း (ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များအတွက်ဆေးလိပ်သောက်၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောထားပြီး16).
အရက်စတင် (က stepparent နဲ့ Single-မိဘအိမ်သူအိမ်သားကနေအိမ်ထောင်စုမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖက်ပြောင်းအသုံးပြုပုံတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်100), နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုအဓိကအမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ပြီးနောက်လူဦးရေ-ကျယ်ပြန့်တိုးပွားလာ [Ref အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်။ (101)], တိုးချဲ့စတင်သို့မဟုတ် relapse အကြံပြုခြင်း။ ထို့အပြင် ပို. စိတ်ဖိစီးဘဝဖြစ်ရပ်များတစ်သမိုင်း (ပထမအရက်သုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းဆက်စပ်စေခြင်းငှါ102), ဒီမကြာသေးမီ (6 လ) ဘဝဖြစ်ရပ်များ (အဘို့မတွေ့ရှိခဲ့သည်ပေမယ့်103) ။ ဤသည်ကွာဟမှု (CRF receptors များအတွက်ကုဒ်သွင်းဗီဇ၏ polymorphic အားဖြင့်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏စိတ်ဖိစီးမှု-related အစောပိုင်းစတင်ခြင်းတစ်ဦးမော်ဂျူမှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်102); polymorphic ပေါင်းစပ်ပြီးသက်ရောက်မှုထွက် cancel လိမ့်မည်။
ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ပိုပြီးနေ့စဉ်ကူညီပြီးနှင့် 14-24 အတွက်တစ်သက်တာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည် နှစ်အရွယ်ပါဝင်သူ (94), နှင့်သင်တန်းသားများကို 11-12 (အသက်ခံခဲ့ရသည့်အခါမူးယစ် (မိဘအစီရင်ခံစာ) အားအဖေဘက်ကအပတ်စဉ်အရက်သောက်104).
"တရားမဝင်" မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်၏လေ့လာမှုတစ်ခု 10-16 တို့တွင်အမြင့်မားသောစွန့်စားမှုကဖော်ပြခဲ့သည် နာတာရှည်ဖိအားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည့်နှစ်အရွယ်သင်တန်းသားများကိုသင်တန်းသားများကိုအားနည်းချက်တခုရှိပါတယ်ရပ်ကွက်အတွင်းဖွင့်ကြီးထွားလာခဲ့ကြသည့်အခါ, (105), နှင့် 6-12 နေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်မကြာသေးမီ (14 လ) စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ နှစ်အရွယ်မြီးကောင်ပေါက်ပေမယ့်မရတစ်သက်တာ၎င်းတို့၏မိဘများကအစီရင်ခံသည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ် Self-အစီရင်ခံအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်, (တဦးတည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမျိုးအစားအဖြစ်တိုင်းတာ) ဆေးခြောက်, အက်ကွဲ, ကင်း, ဘိန်းဖြူ, ဒါမှမဟုတ်အမ်ဖီတမင်းအသုံးပြုမှုအစောပိုင်းကစတင်ခြင်းဟောကိန်းထုတ် (103), အသက်အရွယ် 16 မတိုင်မီပိုပြီးနေရာရွှေ့ပြောင်း (ယေဘုယျအားဖြင့် sedatives) 18-35 ကြားတွင်ဆေးခြောက်, အက်ကွဲ, ကင်း, hallucinogens, ဒါမှမဟုတ်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးသုံးပြီး၏အစောပိုင်းစတင်နှင့်ဆက်စပ်သော်လည်း နှစ်အရွယ်လူကြီးများ (106) ။ မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများထိုးသွင်းအစပျိုးရန်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့, ထောင်ချခြင်း, မတည်မငြိမ်အိမ်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်လိင်တစ်သမိုင်း (83, 84), စိတ်ကြွဆေး (82), သို့မဟုတ်ကိုကင်း (107) သက်ဆိုင်ရာတ္ထုများထိုးသွင်းရန်ယခင်ကရင်တော့မှားမယ်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၌၎င်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကျဉ်းသား၏လေးပုံတပုံအကြောင်းကို (ကဗြိတိန်အကျဉ်းထောင်၌ပထမဦးဆုံးအချိန်ဘိန်းဖြူအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြ108).
ထို့ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောနာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲဖိအားတ္ထုများအမျိုးမျိုးအတန်းနှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်ရန်နှင့်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာအသုံးပြုမှုကိုစတင်ရန်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများ predispose ။ သို့သော်စတင်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များအမျိုးအစားများလေ့လာမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအတန်းကိုဖြတ်ပြီးကိုက်ညီမှုပေါ်လာပါသည်။
တိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပိုစိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲ, ဒါမှမဟုတ်မျှော်လင့်ထားသည့်စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေးစခန်း (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အကြားစတင်ဆေးလိပ်များအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်109, 110), နှင့်, အမျက်ဒေါသ, ကွော, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါမွငျ့မားရှက်ကြောက်စိတ်, ဒါမှမဟုတ် 9-15 (အသက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားနီကိုတင်း, အရက်, ဒါမှမဟုတ်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းစတင်ရန်ဘဝတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်အတူမကျေနပ်မှု111, 112) ။ 12 အတွက်သို့သော်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ တစ်နှစ်ကြားရှိ (အစောပိုင်းအရက်၏စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရ103) ။ ထို့ကြောင့်, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်သို့မဟုတ်ယေဘုယျစိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုရောက်သောမျှော်လင့်ထားသည့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်, နီကိုတင်း, အရက်, ဒါမှမဟုတ်ဆေးခြောက်ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့မြီးကောင်ပေါက် predispose စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုအစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှပထမဦးဆုံးအချိန်အသုံးပြုမှုကိုပြောင်းလဲရန်ခဲ့ပါဘူး။
ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကလေးဘဝနာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များတ္ထုများအသုံးပြုမှုအစပျိုးဖို့အန္တရာယ်တိုးလာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအတန်းကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးအစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာပထမဦးဆုံးအချိန်အသုံးပြုမှုစတင်ပါရန်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာစတင်၏မြင့်မားသောစွန့်စားမှု, ဒါပေမယ့်မရအစောပိုင်းကအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောခံခဲ့ရသည်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များလွှမ်းမိုးနေဖြင့်စတင်မထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အဲဒီအစား, စိတ်ဖိစီးမှု (အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်တ္ထုများစိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာရာနိုင်သောယုံကြည်ချက်အပါအဝင်ရိုကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများ, ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ,109, 110).
စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေ (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ခြီးမွှောကျနေသည်113) ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ရှာကြံပိုမိုမြင့်မားသောအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်အာရုံခံစားမှု (အရက်သုံးစွဲခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့်114) ။ ဘေးကင်းလုံခြုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသော်လည်းအန္တရာယ်များလုပ်ရပ်များ (က, ventromedial prefrontal cortex ၏တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြီ115) ။ မူးယစ်ဆေးမသုံးမှမိဘတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆရာမအားဖြင့်ဥပမာကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုသည်, ventromedial prefrontal cortex ၏အန္တရာယ်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုလျော့ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex ၏ဘေးကင်းလုံခြုံ-ဆက်စပ် activation တိုးမြှင့်နိုင် (116) ။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှု (အန္တရာယ်များလုပ်ရပ်တွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်117), အထူးသဖြင့်အတွင်း HPA ဝင်ရိုးသို့မဟုတ် noradrenergic အရေးပါ (၏မြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှင့်အတူလူအတွက်118) ။ ဤ (functioning prefrontal ၏တားစီးနှင့်အတူဆက်နွယ်စိတ်ဖိစီးမှု-related ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုမှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်55) dopamine D1 ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးမြှင်ထေိုနှင့် prefrontal ဒေသများရှိα1-adrenergic receptors အားဖြင့် (59) ။ Norepinephrine (ဖိအားများ၏ကြာချိန်တစ်လျှောက်လုံးမွငျ့မားနနေိုငျ119), ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်းနှင့်အတူလူ (တို့တွင်ဖိအားရဲ့အဆုံးအပြီးတစ်ခုတိုးချဲ့မြင့်နှင့်အတူ75), စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ဆင်းရဲသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်အကြံပြုခြင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အချို့ (တ္ထုများစိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာရာနိုင်တဲ့ဘက်လိုက်မှုရှိစေခြင်းငှါ109, 110).
ဆင်းရဲသောသူကိုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစိတ်ခံစားမှုရောက်သောကာလအပါအဝင်စိတ်ဖိစီးမှုကာလအတွင်းသို့မဟုတ်အောက်ပါတိုးလာနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်းနှင့်အတူလူကြောင့် HPA ၏တိုးလာ reactivity ကိုမှဆငျးရဲသားဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချရန်အထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် SAM ကို (ပုဆိန်74, 75) နှင့် dorsolateral ၏ချို့ယွင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ventromedial prefrontal cortical မှ (70), အရာမှတ်ဥာဏ်ထိန်းညှိ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှု (68, 69).
ဂဏန်း Figure22 ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် Impulse အဖြစ်ရိုကဲ့သို့သောအချက်များပေါ်တွင်စိတ်ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင်သက်ရောက်မှုဆက်စပ်ရသော, စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုစတင်ကြားဆက်ဆံရေးတွေ့ရမယ်။ ရိုကဲ့သို့တိုးမြှင်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို, အနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်တ္ထုများ, ခံစားချက်သို့မဟုတ်သက်သာစိတ်ဖိစီးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ကျွမ်းကျင်မှု, ဒါမှမဟုတ်ချို့ယွင်းအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ဆင်းရဲသားကိုဆုံးဖြတ်ချက်အန္တရာယ်များအပြုအမူတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မား Impulse စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စတင်များအတွက်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်နိုငျသောယုံကြည်ချက်နှင့်အတူလူ။
ဖိအားပစ္စည်းဥစ္စာစတင်သို့မဟုတ်ကနဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုမော်ဒယ်။ ဖိအား HPA ထိခိုက်စေခြင်းနှင့် SAM ကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတိုးမြှင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအယှက်နိုင်သည့်, ပုဆိန်။ အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်မှာရိုကဲ့သို့အဆင့်မြင့်နှင့်အတူလူများမှာ ...
နယ်လ်ဆင် et al ။ (120) ကလေးဘဝဆိုအသုံးပြုမှုအပေါ်လူကြီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, ပုံမှန်အသုံးပြုမှု, ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်း, အရက်, ဆေးခြောက်, ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, sedatives, ဒါမှမဟုတ် opioids ၏အလွဲသုံးစားမှု / မှီခို၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာများနှင့်နီကိုတင်း၏ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့သော်လည်းမအရက်နှင့်မဆို ဆေးခြောက်, ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, sedatives, ဒါမှမဟုတ် opioids ၏အသုံးပြုမှုကို (ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်အကဲဖြတ်မခံခဲ့ရ) ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတစ်သမိုင်းများကခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွငျမဆို licit သို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးစွဲဖို့အန္တရာယ် (စုဆောင်းခြင်းကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အတူ linearly တိုးလာ4).
School- သို့မဟုတ်မိသားစု-ဆက်စပ်ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်, အရက်သုံးစွဲခြင်း, သို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အကြားမည်သည့်တရားမဝင်တ္ထုများအသုံးပြုခြင်း၏ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များကိုခြီးမွှောကျစွန့်စားမှု (7, 8, 10, 11) ။ သူတို့အလေးပေးခံစားခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးလိပ်သောက်၏ခုနစ်ဆယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း (သူတို့ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကနေတိုးတက်အစီရင်ခံတင်ပြ28) ။ အလားတူပင်ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှု (121ကျောင်း), ပိုပြီးပြဿနာများ (97), နှင့်မြင့်မားသောမိသားစုဆင်းရဲတွင်းနက် (122မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပုံမှန်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့စမ်းသပ်ရာမှပြောင်းရွှေ့ဖို့) တိုးမြှင့်စွန့်စားမှု။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, Self-အစီရင်ခံနေ့စဉ်ကူညီပြီးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်တိုးမြှင့် cortisol) တစ်ခုမထိန်းချုပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားရန်စမ်းသပ်မှု၏အချိန်ကဆေးလိပ်သောက်အပြုအမူဆက်စပ်သို့မဟုတ် 1 စီးကရက်ထက်နည်းပါးလာသောက်သည်တဲ့သူလူကြီးများအတွက် 20 နှစ်နောက်ဆက်တွဲမှာမပြုခဲ့ (တစ်ပတ်ကို123).
လေ့လာမှုတစ်ခု (နီကိုတင်း, အရက်နှင့်ကဖိန်းဓာတ်၏အသုံးပြုမှုအပေါ်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုစိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်အရက်သောက်အကြားအလားအလာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးကြည့်ရှု124) ။ ဒီလေ့လာမှုကအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုလက္ခဏာတွေအကဲဖြတ်ရန်, ဒါပေမယ့် Self-အစီရင်ခံပျှမ်းမျှနေ့စဉ်စီးကရက် (လေးစီးကရက်) ပေါ်တွင်အခြေခံများနှင့်အပတ်စဉ်ဖိန်းဓာတ် (လေးယူနစ်) နှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်း (လေးခြောက်လမှယူနစ်) မဘာသာရပ်များအဓိကအား Non-မှီခိုဖြစ်ပေါ်လာ ပုံမှန်အသုံးပြုသူများအနီကိုတင်းသို့မဟုတ်အရက်အလွဲသုံးစားမှု (မူးရူးသောက်) အတွက်စံတွေ့ဆုံလူတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအကဲဖြတ်ခဲ့သည် 1 တစ်ဦးစာမေးပွဲဖြေဆိုကာလမတိုင်မီနှင့်စဉ်အတွင်းလ; တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းစာမေးပွဲအုပ်စုတွင်အကဲဖြတ်အကြားနှောင့်နှေးကိုက်ညီနှစ်ဦးစလုံးအကဲဖြတ်အကြားတစ်ဦးနှောင့်နှေးနှင့်အတူ Non-စာမေးပွဲကာလအတွင်းနှစ်ကြိမ်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ (ပျမ်းမျှ 12 ခန့်) ကဖိန်းဓာတ်၏ non-စာမေးပွဲတွင်အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စာမေးပွဲဖြေဆိုကာလမြင့်မားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေအဖြစ် (ပျမ်းမျှ 11 ခန့်) စီးကရက်၏နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းတိုးလာခဲ့သည်မြင့်မားသောအပတ်စဉ်အသုံးပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ အရက်သောက်အတွက်ပြောင်းလဲမှု။ ပြောင်းလဲမှုကိုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်အမှတ် (124) ။ တိုးမြှင့်စီးကရက်စားသုံးမှု (အခြေခံ× 3) မှန်မှန်တ္ထုများအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်သေချာပေါက်များအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက်တိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကရှင်းပြသည်စေခြင်းငှါသော်လည်းစိတ်ဖိစီးမှု-အုပ်စုတွင်ကဖိန်းဓာတ်အသုံးပြုမှုအတွက်တိုး၎င်း၏လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အသုံးပြုကရှင်းပြသည်စေခြင်းငှါ အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခို။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကြားနေခြယ်လှယ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်မထိန်းချုပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမိသားစုနှင့်အတူ Non-မှီခိုလူမှုရေးသောက်အတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာသောက်စရာအရက်၏ Post-ကိုင်တွယ်သုံးစွဲမှုတိုးပွားလာပေမယ့်မပေးကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်စူးရှသောကဖိစီးမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ၏သမိုင်း (125).
သင်တန်းသားများကိုခဲ့ကြသည်မတိုင်မီဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ဆေးခြောက်ဘို့မိဘသေခံခြင်းအပါအဝင်အဓိကဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအသုံးပြု 15 အဟောင်းအနှစ်, မိဘမူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ, protected 14-24 အကြားမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုဆန့်ကျင် နေ့စဉ်ကူညီပြီးအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း, ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအစပျိုးခဲ့သောနှစ်အရွယ်ပါဝင်သူ (94), အဓိကဖိအားအကြံပြုခြင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်, ဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်ရာမှပုံမှန်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းမှအကူးအပြောင်းကိုမသက်ရောက်, ရှိစေခြင်းငှါ။
နီကိုတင်းရန်မသို့မဟုတ်အနိမ့်မှီခိုနှင့်အတူဆေးလိပ်သောက်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲ (စိတ်ဖိစီးမှု-သော induction ကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဒါမှမဟုတ် 1 နှစ်နောက်ဆက်တွဲမှာဆက်စပ်ဘူး123) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စမ်းသပ်ရာမှပုံမှန်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ှု (အနိမ့် Self-လေးစားအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်8, 126, 127) နှင့်တိုးမြှင့်အနုတ်လက္ခဏာ (အကျိုးသက်ရောက်စေ10, 128).
ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာဆေးခြောက်, ကိုကင်းအခြားစိတ်ကြွဆေး, opiates, ဒါမှမဟုတ် sedatives, နီကိုတင်း၏ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှစမ်းသပ်ရာမှပြောင်းလဲဖို့အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များပုံမှန်အစည်းအဝေးနီကိုတင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမှအကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့ပေမယ့်ဆေးခြောက်အဘို့ဤအကူးအပြောင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ဘူး။ Post-ကလေးဘဝနာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တိုးတက်မှုစမ်းသပ်ရာမှကိုကင်းများအတွက်ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်း, (ဘိန်းဖြူအပါအဝင်) ကိုအခြားစိတ်ကြွဆေး, sedatives, opiates နှင့် hallucinogens အကြားအလားအလာဆက်ဆံရေးအပေါ်နည်းနည်းသတင်းအချက်အလက်ရှိပါသည်။
စတင်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမတူဘဲအသုံးပြုပုံပုံမှန်သုံးဖက်ပြောင်းနှင့် / မှီခိုအလွဲသုံးစားအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုအလားအလာယခင်တှငျဆှေးနှေးရိုကဲ့သို့ယန္တရားများအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်, စိတ်ခွန်အားနိုးယန္တရားများအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တ္ထုများအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုဆက်စပ်နိုင် အပိုင်း။ စမ်းသပ်ဆဲကနေပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှတိုးတက်မှုတ္ထုများ၏အနိမ့်ဆေးများ၏ဆုလာဘ်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှလျင်မြန်စွာတင်းမာမှုများနှင့်စားသုံးမှု၏တိုးမြှင့်ထိုးနှင့်ကြိမ်နှုန်းဆက်စပ်ပေမည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုတ္ထုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးရှိအတိုးအရှိန်မြှင့်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ရို Impulse နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသီးခြားအန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု (အာရုံစိုက်) ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်ဘူး။ ပစ္စည်းဥစ္စာ-ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်တစ်ဦးရန်လိုကြွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အမြီး-ဖြစ်တော့ 4-7 ထိတွေ့ခဲ့သည် ကြိုတင်ကင်းမှပထမဦးဆုံးအချိန်ထိတွေ့မှုမှရက်ပေါင်း (129-132) သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး (133) ။ Non-အလေးပေးထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စိတ်ဖိစီးမှုကြုံတွေ့ခဲ့သောသူတို့ကိုတိုးမြှင့်ကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး 3-7 ပြသ အလေးပေးသော်လည်းပထမဦးဆုံးအချိန်အသုံးပြုမှုကိုအပြီးရက်ပေါင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များပိုင်းတွင် (ဆင်တူအသုံးပြုမှုကိုအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့129-132) ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေး၌ဤတိုး (မူးရူးမှအလေးပေးတိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးတိုးလာသဘောထားကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ129) ။ အဆိုပါလှုပ်ခြင်းခံသောသူတို့အားမကြာမီပထမဦးဆုံးအချိန်ပြီးနောက် Self-အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုတိုးမပြခဲ့ဘူးသော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးလည်း, (တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားဖြစ်သော) ခြေလျင်လှုပ်လက်ခံရရှိအခြားကြွက်သက်သေခံခဲ့ကြောင်းလှုံ့ဆော်-နုံကြွက်များတွင်တိုးမြှင့် (ကိုသုံးပါ134), အကြံပြုစိတ်ခံစားမှုဖိအားကိုပိုမိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှစမ်းသပ်အသုံးပြုသူများသည်အတွက်တင်းမာမှု inducing အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားထက်ပိုအစွမ်းထက်ဖြစ်ကြသည်။
တနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းဥပမာပစ္စည်းဥစ္စာများပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှု,, (လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အပြီးစင်မြင့်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအထိမ်းအမှတ်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များာင်းစတင်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသောစေခြင်းငှါ49, 135) ။ တိရိစ္ဆာန်များကနဦးစားသုံးမှုမှာမော်တာ activation နှိုင်းယှဉ်, ထပ်ခါတလဲလဲစားသုံးမှုရှောင်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိမှုနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြကြောင်းလှောင်အိမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့အ preference ကို (အေးစက်ရာအရပျတိုးလာပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်, သတိထားရမယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏သေးငယ်တဲ့ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်တိုးမြှင့်မော်တာကို Activation အားဖြင့်ထင်ဟပ်နေသည် ထပ်ခါတလဲလဲပစ္စည်းဥစ္စာ Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီး preference ကို) ။ အသိ (dopaminergic striatal ယန္တရားများပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်မှီခို49, 135) ။ စိတ်ဖိစီးမှု (နှင့်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ) (dopaminergic ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များကိုထိခိုက်48, 50, 51), နှင့်တ္ထုများနှင့်အပိုဆောင်းစိတ်ဖိစီးမှုထိခိုက်မခံတဲ့ခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive တိုးပွါး (53) ။ စတင်ပြီးနောက်ထပ်ခါတလဲလဲ, ဒါပေမယ့်အပြောင်းအလဲမြန်, အလွယ်တကူရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းတ္ထုများအသုံးပြုမှုအလားအလာအရိပ်ကိုပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပတွေကိုမှ, ဒီစနစ်ကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှ ပို. ပို. ပို. ပင်အကဲဆတ်ဖြစ်လာမှခွင့်ပြုလျှင်, စွဲနာမကျန်း-သင်တန်းနောက်ပိုင်းမှာအဆင့် Pavlovian သင်ယူမှုကနေတဆင့် ပစ္စည်းဥစ္စာ (ဥပမာ, တစ်နီယွန်နိမိတ်လက္ခဏာ) ၏အသုံးပြုမှုကို (49, 135).
ကျန်းမာခုနှစ်, မော်တာတုံ့ပြန်မှုများနှင့် striatal dopamine အဲဒီ receptor ထေိုဖြင့်တိုင်းတာမူးယစ်ဆေး-ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျား, dopamine စနစ်များ sensitive က, စိတ်ကြွဆေးသာသုံးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပြီး, အနည်းဆုံးအားများအတွက်ဆက်လက် 1 ပြီးခဲ့သည့်အုပ်ချုပ်မှုအပြီးတစ်နှစ် (136) ။ ထို့အပွငျမွငျ့မားရို Impulse, တစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူများအတွက်အမှတ်အသားနှင့်အတူယောက်ျားမသက်ဆိုင်ဘဲမူလနှစ်သက်သောပစ္စည်းဥစ္စာများအတန်းအစား (က137), (အောက်ပိုင်းစရို Impulse နှင့်အတူယောက်ျားထက်ာင်းဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ခဲ့ကြသည်136).
စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းစမ်းသပ်သို့မဟုတ် Non-မှီခိုပုံမှန်အသုံးပြုသူများအကြားတွင်တ္ထုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးခြီးမွှောနိုင်ဘူး။ ကျန်းမာသန်စွမ်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့တွင်, စိတ်ဖိစီးမှုသော induction ပြီးနောက်ဃ-စိတ်ကြွဆေး၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်မှု (ဒီထက်ဒုက္ခဆင်းရဲသတင်းပေးပို့သူတို့တွင်ထက်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကို-သွေးဆောင်ဒုက္ခဆင်းရဲအစီရင်ခံသောသူတို့သည်ပိုပြီးပျြောမှေ့စအဖြစ် rated ခဲ့သည်138) ။ လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းတိရိစ္ဆာန်များမှာပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နီကိုတင်း-ရင်တော့မှားမယ်ကြွက်အလေးပေး 24 Non-အလေးပေးကြွက်များထက်နီကိုတင်း၏အနိမ့်ဆေးများမှာဇအစောပိုင်းကဝယ်ယူရာအရပျ preference ကို (139); လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်, ဒါပေမယ့်မပေးရာအရပျ preference ကိုသူ့ဟာသူလေးလည်းအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အလားအလာအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ် CRF-1 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူ Pre-ကုသမှုပြီးနောက်လျော့ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပဲကြိုတင်မော်ဖင်းအကိုက်-အစပျိုးကြွက်တွေမှာပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှတင်းမာမှုလျှော့ချဖို့စိတ်ဖိစီးမှုမသက်ဆိုင်ဘဲမူလကြွက်ကြိုတင်စိတ်ဖိစီးမှုသော induction မှအနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောဆေးညွှန်းပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိ၏အနိမ့်ဆေးညွှန်း၏ထပ်ခါတလဲလဲ Self-အုပ်ချုပ်ရေးခဲ့သည်။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု (သို့သော်မရခြေလျင်လှုပ်ခြင်းခံသောကြွက်အဘို့, (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု inducing) ခြေလျင်လှုပ်လက်ခံရရှိအခြား mouse ကိုသကျသခေံခွငျးအားဖွငျ့အလေးပေးခဲ့ကြွက်အဘို့အပြခံခဲ့ရ140) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း CRF ကကမကထပြုခဲ့နိုင်သည့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုထိန်းသိမ်းဘို့လိုအပ်ဆေးထိုး, လျှော့ချ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်အထပ်ထပ် / နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုမှတိုးမြှင့် sensitivity ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဂဏန်း Figure33 အထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးရို Impulse နှင့်အတူလူအတွက်ကနဦးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ထိခိုက်စေစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောဖိအားများကပုံမှန်အသုံးပြုစမ်းသပ်ရာမှှုအပေါ်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများမမှန်အသုံးပြုစိတ်ဖိစီးမှု system ကို activation ၏သက်ရောက်မှုတင်ဆက် သို့မဟုတ်တိုးလာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဤ (စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ပစ္စည်းဥစ္စာထဲကနေအနိမ့်ဆေးများ၏တိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှု, Bing မှပိုမြန်တင်းမာမှုများနှင့်မြင့်မားသောစိတ်ကျေနပ်မှု, အပျော်အပါး, ဒါမှမဟုတ်ဆုလာဘ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ138, 141, 142), အရှင်အပြုသဘောအားကောင်း potentiating ။ စိတ်ဖိစီးမှုအရေးကြီးတဲ့အကြားအလားအလာအပြန်အလှန်ယခင်အခန်းတွင်ဖော်ပြထားရိုကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများများ၏သက်ရောက်မှုများအပြင်တည်ရှိနိုင်ဘူး။
ဖိအား, ကနဦးမမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့် တွဲဖက်. , လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကနေပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါမည်သို့မော်ဒယ်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုနိုင်ပါတယ်နိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏လှုံ့ဆျောမှုသက်ရောက်မှုမှစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ, ကူး-sensitize ...
ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ (ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အန္တရာယ်တိုးပွါး12-15, 17-20, 23, 78, 86, 93, 143, 144), နီကိုတင်း, အရက်, ဆေးခြောက်, စိတ်ကြွဆေး, sedatives နှင့် opioids, ဒါပေမယ့်မရကိုကင်းဘို့အပါအဝင် (120) ။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုကလေးဘဝတစ်သမိုင်း (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ကိုဖြတ်ပြီးလူကြီးများအတွက်လေးလံသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏအရက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်22, 88, 93), နဲ့အခြားလေ့လာမှုများဒီမတှေ့ပေမယ့် (89) ။ မည်သည့် licit သို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးစွဲဖို့အန္တရာယ် (4) နှင့်အလွန်အကျွံသောက်၏ပြင်းထန်မှု (143) နှင့်နီကိုတင်းမှီခို (93) ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူတိုးတက်လာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါအကြားဆက်ဆံရေး (တိုးလာရို Impulse ကကမကထပြုခဲ့နိုင်22) သို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်လူကြီးအတွက်နောက်ဆက်တွဲစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ (145, 146), အန္တရာယ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်းနှင့်အတူလူတို့တွင်တစ်ဦးသောဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အကြံပြုပိုမိုမြင့်မား Impulse သို့မဟုတ်နောက်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များကြုံတွေ့ရသောသူတို့နှင့်အတူရှိသူများအတွက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏။
ပိုပြီးဆေးလိပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးလိပ်သောက်များတွင်အလုပ်မဟုတ်တော့နာရီ, စေချင်တာလေးမျိုး၏သဘောထားတွေ, သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရိပ်မိမရှိခြင်း, တိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လျော့နည်းအလုပ်အကိုင်အစိတ်ကျေနပ်မှု (147-149) နှင့်နီကိုတင်းမှီခိုဘို့ပိုပြီးရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ဆုံမှ (150) ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နီကိုတင်းစားသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်းဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်လေ့လာခဲ့ပါပြီ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးလိပ်သောက်များတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများ၏အုပ်ချုပ်မှု (အသေးစိတ်စီးကရက်ဆေးလိပ်သင်တန်းသားများအတွက်ရလဒ်151) သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. Puff ယူပြီး (152) တိုက်ရိုက်စိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်နေတဲ့ကြားနေထိန်းချုပ်မှုကိုင်တွယ်နှိုင်းယှဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအောက်ပါ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ (စူးရှဆုတ်ခွာကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက်မတရားသောခုခံတွန်းလှန်ရန်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လျော့နည်းသွား Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြီ153), စိတ်ဖိစီးမှု, တဏှာ, သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုခြင်း။ သို့သော်အခြားသူများက (ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုထိန်းသိမ်းရေးကြားနေကိုင်တွယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ပြီးနောက်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့သာ non-သိသိသာသာလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ရလဒ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြ154), နှင့်အမှန်တကယ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များစီးကရက်အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမ (155).
အရက်အဘို့, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအားနည်းချက်တခုရှိပါတယ်ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင် (အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲဟောကိန်းထုတ်156), နှင့်ပိုပြီးတစ်သက်တာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များမူးရူးသောက်စား၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အခါသမယနှုန်းထက်ပိုမသောက်, အရက်အလွဲသုံးစားမှုအကြံပြုခြင်း, 15 အတွက် နှစ်အရွယ်ပါဝင်သူ (157) ။ အလားတူဆက်ဆံရေးလူကြီးများအကြားတွင်လည်းအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ မူးရူးသောက်စားခြင်းနှင့်ပုံမှန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ elevated Self-အစီရင်ခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတိုးလာအန္တရာယ် (158), ခြောက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတိတ်နှစ်ဖိအားကြုံတွေ့ဘဲလျက်အစီရင်ခံသောသူတို့အားအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခြောက်လနေ့စဉ်အရက်အချိုရည်နှင့်အတူပိုမိုအတိတ်နှစ်နေ့စဉ်အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပိုပြီးအတိတ်နှစ်ဖိအား (159) ။ ဒီဆက်နွယ်မှု (အသုံးပြုမှုနောက်ပိုင်းတွင်စတင်ခြင်းနှင့်အတူလူထက်အသက်အရွယ် 14 မတိုင်မီအရက်သုံးစွဲခြင်းစတင်ခြင်းနှင့်အတူလူအတွက်အားကောင်းခဲ့သည်159) ။ ဒါကအဆုံးစွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု (corticotropin ဟော်မုန်း receptors လွှတ်များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇ encoding ကတစ် polymorphic အားဖြင့် modulated စေခြင်းငှါ157).
ဓာတ်လှေကားတက်ကြွတာဝန်ဝန်ဆောင်မှုအင်္ဂါတို့တွင်ဖိစီးလေးလံသောက်သုံးရေနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပါတယ်, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, တရားမဝင်တ္ထုများအသုံးပြုခြင်း (6) ။ ထို့အပွငျတက်ကြွတိုက်ခိုက်ရေးပါဝင်ခဲ့သူကိုစစ်-ဇုန်မှတပ်ဖြန့်ယင်းသိုက်သို့မဟုတ်အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ, ဒါပေမယ့်မတက်ကြွပုဂ္ဂိုလ်များ, တက်ကြွတိုက်ခိုက်ရေးထိတွေ့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရက်-related ပြဿနာများ Post-ဖြန့်ကျက်မိုးသည်းထန်စွာအရက်သေစာအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာခဲ့ (160) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Post-ဖြန့်ကျက်မူးရူးသောက်စားဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ် (မသက်ဆိုင်ဘဲမူလတက်ကြွတိုက်ခိုက်ရေး၏တက်ကြွသောဝန်ဆောင်မှုအင်္ဂါများ၌တိုးလာခဲ့သည်160) ။ Post-ဖြန့်ကျက်မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှု Developing (တက်ကြွစွာတိုက်ခိုက်ရေးကာလအတွင်းကိုယ်ထင်ရှားဒဏ်ရာသို့မဟုတ်သေခြင်းတရား၏ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ့ကြုံဖူးသောသူတို့အားအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်161) ။ ဤ (စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုအရက်အသုံးပြုမှုဆက်လက်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းယခင်ပုံမှန်အသုံးပြုသူများအအကြားတွင်ပိုပြီးအရက်စားသုံးမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်ကြောင်းအကြံပြု162) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အချို့သောလေ့လာမှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များနှင့်သောက်သုံးရေပုံစံများအကြားမျှဆက်ဆံရေးအစီရင်ခံ: ကိုလည်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများအတွက်စာရင်းကိုင်တဲ့အခါမှာမကြာသေးမီကဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအရက်သောက်ပုံစံများကိုခန့်မှန်းမရ (143) သို့မဟုတ်လိင် (146); ဒီအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုအမြိုးသမီးမြားကိုပိုမိုလေးလံသောသောက်သုံးရေအတွက်သာကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်းနှင့်အတူရှိသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောသော်လည်း, ယောက်ျားတွင်ပိုမိုလေးလံသောအရက်သောက်ဖို့ပြန်ပြောပြဖို့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆေးခြောက်များအတွက် ပို. အဓိကစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ, အထူးသဖြင့်အဓိကဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများ, 199 ငယ်ရွယ်မကြာခဏဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများက (သူတို့တွင်မှီခိုအသုံးပြုခြင်းသည် non-မှီခိုရာမှအကူးအပြောင်းဟောကိန်းထုတ်163), ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အဓိကဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများအကြားဆက်ဆံရေးဖေါ်ပြခြင်းကတခြားလေ့လာမှုတွေပုံတူ (94, 164) ။ ဒီအကူးအပြောင်းမှုအတွက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်ကိုလည်း (ကြိုတင်အသက်အရွယ် 15 မှမိဘအသေခံခြင်းဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်94) သို့မဟုတ်မိဘကွာရှင်း / ခွဲခြာ (165) ဒီအဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက်သည်အခြားလေ့လာမှုများအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြရသေးပေမယ့် (166).
12-17 ၏ကြီးမားသောနမူနာခုနှစ်တွင် (အတန်းကိုဖြတ်ပြီး) နှစ်အရွယ်မြီးကောင်ပေါက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အန္တရာယ်ကိုမှီခို (အားနည်းချက်တခုရှိပါတယ်ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်ဖြင့်သို့မဟုတ်အနိမ့်မိသားစုဝင်ငွေအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်156) ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အရက်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအတန်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ နာတာရှည်ဖိအားစဉ်းစားအားနည်းချက်များကိုရပ်ကွက်, (105), (စတင်ရန်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းပေးနိုင်တယ်လို့77) နှင့်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထောင်ချခြင်း, မတည်မငြိမ်အိုးအိမ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအဘို့ကုန်သွယ်လိင်တစ်သမိုင်း (ကိုကင်းထိုးသွင်းလူကြီးများအကြားတွင်ပိုပြီးမကြာခဏကင်းဆေးထိုးနှင့်ဆက်စပ်ပြီ107).
ဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်အသက်တာ၌စိတ်ဖိစီးမှု, စမ်းသပ်ခြင်း၏အချိန်တွင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါများအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်တက်ကြွစွာ (နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုပြီးသူလူစုကိုတဏှာနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကိုတိုးပွားစေ153, 154, 167-176), အရက် (177), ဆေးခြောက် (39, 178), ကိုကင်းများသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ကြွဆေး (179-183), သို့မဟုတ် opiates (184, 185) ။ တဏှာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲတွင်ဤစိတ်ဖိစီးမှုသွေးဆောင်တိုးမကြာခဏအစီရင်ခံထားပြီ, အချို့လေ့လာမှုများဖိအားများလွန်းပျော့ခဲ့ကြသည်အလားအလာရှိသောကြောင့်, တဏှာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုမရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြခဲ့သည် (အတန်အသင့်ခက်ခဲဂဏန်းသင်္ချာတာဝန်) (ပေမဲ့184) သို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်ကွဲပြားမှုများ (183) ။ တဏှာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (နီကိုတင်းစွဲယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးများတွင်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်: တွေ့ရှိချက်ကိုက်ညီမှုပါပြီပေမယ့်အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှု, ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်တဏှာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြံပြု171) သို့မဟုတ်ကင်း (183), မြင့်သောချို့ယွင်းသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတဏှာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ပေမယ့် (186) ။ စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအမျိုးသမီးတွေကိုဆွေမျိုးယောက်ျားအတွက်တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်, အဘယ်သူမျှမခြားနားချက် (ရှောင်သူကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်တဏှာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်187) ။ ထို့ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲ, အနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်တပ်မက်သွေးဆောင်နိုင်ဘူး။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ, အနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ခြင်း, တဏှာနောက်ပိုင်းတွင်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ စီးကရက်အသုံးပြုမှုကိုအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်, စိတ်ကျရောဂါ၏တိုးမြှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်တွေကိုအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်နှင့်ရိပ်မိလူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု (ခဲ့သည်155) ။ ဤ (ငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဆေးလိပ်သောက်နှင့်အတူစမ်းသပ်ရာမှနီကိုတင်းမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပိုလက္ခဏာတွေနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်128) ။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအပါအဝင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဒုက္ခဆင်းရဲ, အစ ( ပို. မကြာခဏဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းဟောကိန်းထုတ်165, 188) နှင့်ဆေးခြောက်မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း (189), အကူးအပြောင်းတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုအခြားသူများမတွေ့ရှိခဲ့သည်ပေမယ့် (165) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဝှမ်းစိတ်ကျရောဂါ၏အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမျိုးသမီးများ, ရောဂါလက္ခဏာတွေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ပြဿနာများ (ဆက်နွယ်နေကြောင်း190).
စိတ်ဖိစီးမှု-တိုးမြှင့်တဏှာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကြောင့်တ္ထုများကဤစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိကူညီနိုငျသောယုံကြည်ချက်မှဆက်လက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးလိပ်သောက် (စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေးဆေးလိပ်သောက်ဆက်လက်အရေးပါသောရည်ရွယ်ချက်ကအစီရင်ခံတင်ပြ155, 191, 192), နှင့်မြင့်မားသောအနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် (အသေးစိတ်ဆေးရွက်ကြီးကို အသုံးပြု. နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်193) ။ အဆိုပါဒုက္ခဆင်းရဲကိုထိန်းညှိဖို့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အသုံးပြုမှုနီကိုတင်း၏, အရက်, ဒါမှမဟုတ်ဆေးခြောက်များအကြားဆက်ဆံရေးဟာသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် (တိုးချဲ့စိုးရိမ်စိတ် sensitivity ကိုရှိသူများအတွက်အားကောင်းခဲ့သည်194) သို့မဟုတ်အရက်ပြဿနာများ၏မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူလူ (195) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆေးခြောက် 2-7 ကိုအသုံးပြုတဲ့သူကလူတစ်ဦးနမူနာအတွက် အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုအကြံပြုခြင်းတစ်ပတ်ကိုရက်ပေါင်း, ဆေးခြောက်စိတ်ဖိစီးမှု၏ခံစားချက်များကိုသက်သာရာသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာ (အကျိုးသက်ရောက်စေရန်အသုံးပြုခဲ့တဲ့မေးခွန်းလွှာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အနိမ့် Self-အစီရင်ခံဒုက္ခဆင်းရဲသည်းခံစိတ်196).
ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များမြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်မှာအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောစားသုံးမှုအားဖြင့်မှတ်သားပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါများအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသုံးအပန်းဖြေ non-ပြဿနာ, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမြင့်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်တဏှာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကနေတစ်ဆင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှု၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်စူးရှသောရုပ်သိမ်းမှာကြုံတွေ့မှီခိုစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဒုက္ခဆင်းရဲနေစဉ်အတွင်း (အသစ်စားသုံးမှု precipitate စေခြင်းငှါ45, 197, 198) ။ acute ဆုတ်ခွာ (တဏှာ, စိတ်ကျရောဂါ၏ခံစားချက်များကို, စိတ်တိုတာတွေသို့မဟုတ်အမျက်ဒေါသတိုးမြှင့်နာမငြိမ်ခြင်း, abstinence တစ် 24-ဇကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုအယှက်မှပြသထားသည်170, 197, 199); ဤအလက္ခဏာတွေလည်း (စိတ်ဖိစီးမှုတွေ့ကြုံခံစားသူကိုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူ Non-abstinent လူတွေအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်198) ။ ဤသည်သံသရာကိုပင်ရပ်တန့်ဖို့လိုလားသူတစ်ဦးအတွက်ကပိုပြီးခက်ခဲသုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့စေသည်။ တ္ထုများ၏တိကျသောအတန်းများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်သာကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နီကိုတင်းစွဲလမ်း၏တိုးလာပြင်းထန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးကွဲလွဲနေသည်သော်လည်းဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များအဘို့, သတင်းအချက်အလက်, အန္တရာယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်, လှုံ့ဆော်, opiate, သက်သာစေသောဆေး, ဒါမှမဟုတ် hallucinogen အသုံးပြုမှုမမှန်၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်ကန့်သတ်သည်။
မှီခိုဖို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မှီခိုအသုံးပြုခြင်းကိုကနေစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တင်းမာမှုအခြေခံအလားအလာယန္တရားများစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အခြေခံယန္တရားတူနိုင်ဘူး။ ထို့ကြောင့်ဤယန္တရားများစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် relapse အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အောက်ပါအောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ယန္တရားများ (ခ) တစ်ဦးမှီခိုနှင့် relapse စဉ်အတွင်းအပျက်သဘောအားဖြည့်ဖို့ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းအပြုသဘောအားကောင်းရာမှအကူးအပြောင်းနှင့် (ဂ) activation ဝင်ရိုး HPA အတွက် concomitant ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တ္ထုများအားဖြင့်ဆုလာဘ်ယန္တရားများ (က) နောက်ထပ် sensitive ကပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ဘူး။
တစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူအများစုဟာ (အချို့အချိန်တွင်နုတ်ထွက်သို့မဟုတ်နောက်ကျောကိုခုတ်ဖြတ်200-203) ။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုအလားအလာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများဆက်လက်ရန်လှုံ့ဆျောမှုမှဆွေမျိုးဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျှော့ချအသုံးပြုပုံဖြတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားအလုပ်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးစိတ်ဖိစီးမှု (ဆေးလိပ်သောက်ငြိမ်းရန်လျှော့ချဖြစ်နိုင်ခြေဆက်စပ်သောထားပြီး149, 204-206), သူတို့ရေရှည်အလုပ်လက်မဲ့တစ်ဦးသမိုင်းရှိခဲ့သည့်အခါငယ်ရွယ်လူကြီးများ (ဆေးခြောက်သုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်207) ။ မူးယစ်ဆေးအကြောထဲထိုးသွင်းတဲ့သမိုင်းနှင့်အတူငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်, အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ (208), သို့မဟုတ်ထောင်ချခြင်း၏သမိုင်း (209) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုငြိမ်းအောက်ပိုင်းလှုံ့ဆျောမှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်သုတေသန (ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုစိတ်ထဲ-ပြောင်းလဲတ္ထုများ၏အကူအညီမပါဘဲတစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုထိန်းညှိနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကြောင့်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နိုင်အကြံပြု155, 191, 192).
နယ်ပယ်အတွက်ကန့်သတ်ထားပေမယ့်အဲဒီလေ့လာမှုများစိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ, ဒါမှမဟုတ်စူးရှဆုတ်ခွာကနေကယ်ဆယ်ရေးကိုရှာတ္ထုများကိုအသုံးသူတွေကိုအတွက်အထူးသဖြင့်, ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းစေကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပိုများသောသုတေသနဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ဒဏ်ရာမှဆက်စပ်ဖြစ်ပြီး, စိတ်ဖိစီးမှု-လှုံ့ဆျောမှုဆက်ဆံရေး may ရှိမရှိဘယ်လို, လှုံ့ဆျောမှုမှအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဖိအားအမျိုးအစားများနှင့်မည်ကဲ့သို့စိတ်ဖိစီးမှုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုထိခိုက်နိုင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ် တ္ထုများနှင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၏အတန်းကိုဖြတ်ပြီးအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။
အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လေ့ချုံးသို့မဟုတ် relapse သုံးပြီးရပ်တန့်ချင်သူတစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (210-216) ။ (ပြန်လည်) လြော့နညျးသှား (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ကိုကင်းနှင့်အတူ, အမျိုးသမီးများအတွက်မဟုတ်ယောက်ျားအတွက်, တိုးတက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏဖြစ်နိုင်၏အန္တရာယ်217) သို့မဟုတ် Non-ထူးခြားပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (218, 219) ။ post-ကုသမှု relapse များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်မှ linearly related ကိုပိုပြီးစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များ (213), အလားအလာကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်းနှင့်အတူလူတို့တွင်အသစ်ကစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များဆက်လက်ထိတွေ့မှု၏ရလဒ်များအပေါ်ကုသမှုကာလအတွင်းအနိမ့်တိုးတက်မှုမှ (218) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါကုသခံခဲ့ရသည်သူတွေကိုအတွက်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အတူ relapse အန္တရာယ်အတွက်အစီရင်ခံတိုး (လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်စိတ်ရောဂါ variable တွေကိုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွား220) ။ ဒါကအဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက် (အရွယ်ရောက်သူများတွင် (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ) စိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကုသမှု relapse အကြားမျှအရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတွေ့သောအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်221, 222).
ဆေးလိပ်သောက်များထဲတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့တိုးမြှင့်ပျက်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်သော (223), နှင့် relapse အန္တရာယ် (မကြာသေးမီကနေထိုင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့သူသို့မဟုတ်အဓိကဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများရှိခဲ့သူတွေကိုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့206) ။ ဤရွေ့ကားဆက်ဆံရေးအဘယ်ကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါဝင်စေခြင်းငှါ, စိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ်အားဖြင့် modulated ခံရ: စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းညှိဖို့သောက်သည်သူကဆေးလိပ်သောက်ပိုပြီးမကြာခဏကတခြားအကြောင်းရင်းများ (များအတွက်သောက်သည်သူတွေကိုထက်ပြန်ရောက်သွားတယ်224), နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ် 24 အတွင်း relapsing တစ်သမိုင်းနှင့်အတူတက်ကြွစွာဆေးလိပ်သောက်သူများအကြားလျော့ခဲ့သည် အနည်းဆုံး3မှာကြာမြင့်ကြောင်း abstinence တစ်သမိုင်းနှင့်အတူဆေးလိပ်သောက်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးနုတ်ထွက်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ပြီးနောက်ဇ လများ (225) ။ စိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ်ဘာသာရပ်များအပိုဆောင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် (နှင့်အတူလေထု၏တစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်တာဝန်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးဒြပ်စင်များဖြစ်စေမယ့်အတန်အသင့်ခက်ခဲတွက်ချက်မှုစမ်းသပ်ခဲ့ကြရာစိတ်ဖိစီးမှုစားစရာစမ်းသပ်ချက်, ရပ်တန့်ဖို့ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်225) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (တက်ကြွစွာဆေးလိပ်သောက်တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့နမူနာပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးမ211), လူတွေ 28 များအတွက်ဆေးလိပ်ရပ်တန့်ဖို့စမ်းသပ်ပြီးနောက်ဟုမေးသောအခါသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာအနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ်နဲ့အစောပိုင်းချုံးအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်ပေမယ့် ရက်ပေါင်း (211).
18 နှင့် 1988 အကြားထုတ်ဝေ 2010 လေ့လာမှုတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းရောဂါ (နှင့်အတူလူအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် relapse အပေါ် 10 လေ့လာမှုများပါဝင်သည်226) ။ စိတ်ဖိစီးမှုအဓိကစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်နေ့စဉ်ကူညီပြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တွေ့ရှိချက်အလားအလာကြောင့်အတိုင်းအတာများကွဲပြားမှု (ရန်, လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးကိုက်ညီမှုရှိကြ၏ပေမယ့်, relapse ၏တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပိုများသောအနုတ်လက္ခဏာဘဝဖြစ်ရပ်များ226) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်မပါဝင်လေ့လာမှုများပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ3လနှင့် 1 နှစ်နောက်ဆက်တွဲ (မှာလူကြီးများအတွက် relapse အန္တရာယ်တိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရ227), နှင့် Non-institutionalized အမေရိကန်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာတစ်ခုမကြာသေးမီလေ့လာမှုအခြေခံအကဲဖြတ်မှာအပြည့်အဝလွှတ်၌နေသောအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူလူတို့တွင်3နှစ်နောက်ဆက်တွဲမှာ relapse သည်အန္တရာယ်ပြီးနောက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ရှာတွေ့ အခြေခံအကဲဖြတ်ရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်ကွာရှင်းသို့မဟုတ်ခွဲခြာ (228).
Non-institutionalized အမေရိကန်လူကြီးများ၏တူညီသောတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာများတွင်အခြားလေ့လာမှုများတွင်အခြေခံအကဲဖြတ်မှာအပြည့်အဝလွှတ်ရှိကြ၏သူကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်3နှစ်နောက်ဆက်တွဲမှာ relapse အန္တရာယ်ကပို Self-အစီရင်ခံစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူတိုးပွားလာခဲ့သည် အကဲဖြတ် baseline မှမတိုင်မီ 12-လအတွင်းဖြစ်ရပ်များ (229) ။ အလားတူပင်နောက်ဆက်တွဲရှေ့အပု 3-လအတွင်းကပိုအဓိကစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များမှာအနည်းဆုံး 304 များအတွက် abstinent ဘူးသောအဓိကအားကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူ3လူတို့တွင် relapse ဟောကိန်းထုတ် ရက်သတ္တပတ် (230) ။ ပြီးခဲ့သည့်အပိုဒ် (တှငျဖျောပွထားသောဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်226ပေမယ့်နှစ်ခုကတခြားလေ့လာမှုတွေ (opiates သုံးပြီးလူများ၏ဆင်တူနမူနာအတူတကင်း, ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်းနှင့်အခြား) အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုပါဝင်သည်ကြောင်း, ထို့အပြင်အတူတိုးပွားလာ relapse opiates ရှောင်လူတို့တွင်ပိုပြီးအပျက်သဘောစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူအန္တရာယ်, ကိုကင်း, ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်းအစီရင်ခံ methadone ကုသမှုပေါ်မှာသူကို opiate အသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်အတူလူ) relapse နှင့်ဖိအားများအကြားမျှအရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးကဖော်ပြခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေ့လာမှုများပစ္စည်းဥစ္စာအတန်းပေါင်းစပ်ပြီးအဘို့, ဆယ်ကျော်သက်အတွက်တိုးမြှင့် Self-အစီရင်ခံစိတ်ဖိစီးမှုဟာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုဆေးခန်းမှဝန်ခံခဲ့သည် (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောကုသမှုပြတ်တောက်ဟောကိန်းထုတ်231), နှင့်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုသမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူတက်ကြွစွာကုသမှုလူကြီးများထက်ပိုမကြာခဏမိသားစုအကြမ်းဖက်မှုသမိုင်းကြောင်းမပါဘဲများထက်မူးယစ်ဆေးဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အပြုသဘောစမ်းသပ်ပြီး (232) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမေရိကန်အိန္ဒိယအမျိုးသမီးများ, relapse အန္တရာယ်6နှင့် 12 တွေထဲမှာ ကုသမှုအပြီးလ (စားသုံးမှုမှာမိသားစုပဋိပက္ခကြောင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်233), နှင့် 1 နှစ်နောက်ဆက်တွဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအန္တရာယ်အခြေခံအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည် (မူးယစ်ဆေးတရားရုံးတွင်ပြစ်မှုထင်ရှားလူတို့တွင်စိတ်ဖိစီးမှုရိပ်မိ234), နှင့်မူးယစ်ဆေး (ထိုးသွင်းကလူအတွက်ထောင်ချခြင်းသို့မဟုတ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တစ်သမိုင်းများက235) ။ လူတွေအများဆုံးမကြာသေးမီကနုတ်ထွက်ကြိုးပမ်းမှု၏ relapse ဖို့တိုတောင်းအချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဖိစီးမှုစားစရာစမ်းသပ်မှုရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုမှုအဖြစ်တိုင်းတာနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုသည်းခံစိတ်နဲ့အခြားတ္ထုများကို အသုံးပြု. အဘို့, ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် relapse အန္တရာယ်အလားတူ (212) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Post-ကုသမှုအကဲဖြတ်ပိုပြီးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ဆင်းရဲသောသူသည်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးတည်းဖြတ်နှင့်3နှင့်6စဉ်အတွင်း relapse အန္တရာယ်တိုးလာ လ (နောက်ဆက်တွဲ236).
ထို့ကြောင့်နာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲဖိအားမြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှု sensitivity ကိုသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကိုအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့အဲဒီလူတွေအတွက်အထူးသဖြင့် relapse, သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်အသက်တာ၌စိတ်ဖိစီးမှုနီကိုတင်းကိုအသုံးပြုပြီးထံမှအစောပိုင်းသို့မဟုတ်တာရှညျ abstinence ခဲ့သူတစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူလူအတွက်မြင့်မားသောတဏှာနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပြီး (237-239) အရက် (240-244), ဆေးခြောက် (245), ကိုကင်းများသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ကြွဆေး (210, 246-250), နှင့် opiates (249, 251) [သို့သော် Ref ကြည့်ပါ။ (184) opiates] သုံးပြီးထံမှကြားနေသူကို opiate အသုံးပြုမှုကိုရောဂါတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူလူမသက်ရောက်ပါ။ ဓာတ်လှေကားတဏှာ [ဥပမာ Ref ။ (210, 237, 242, 252, 253)] နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာ [ဥပမာ Ref အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ (179, 237တိကျတဲ့လမ်းကြောင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားကွဲပြားနိုင်ပေမယ့်)] (relapse ကြိုတင်ခန့်မှန်း215) ။ မြီးကောင်ပေါက်များတွင် relapse (လမ်းကြောင်းကို 1, အပြုသဘောအားကောင်းထင်ဟပ်) အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှသို့မဟုတ် (စိတျအပိုငျး၌) အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများ (လမ်းကြောင်းကို 2, အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားနဲ့ပေါင်းစပ်နေတဲ့အပြုသဘောပြည်နယ်တိုးမြှင့်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာကို အသုံးပြု. ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် relapse (ရမ္မက်ထိန်းညှိဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (လမ်းကြောင်းကို 1, အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည် Self-ထိန်းချုပ်မှု) နဲ့ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖိအား (လမ်းကြောင်းကို 2) ကိုပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာကို အသုံးပြု. ဆက်စပ်နိုင်215).
ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကလေးဘဝနာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးထက်ပိုပြင်းထန် relapse များအတွက် relapse အန္တရာယ်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်နိုင်ပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းမဟုတ်ဖြစ်ကြပြီးနီကိုတင်းနှင့်အရက်မှအများစုကန့်သတ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ ပိုများသောသုတေသနကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတန်းများအတွက်ချုံးသို့မဟုတ် relapse ၏အန္တရာယ်နှင့်ပြင်းထန်မှုအပေါ် Post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်လိုအပ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် relapse အကြားအလားအလာဆက်ဆံရေးစိတ်ဖိစီးမှု-တိုးမြှင့်တဏှာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများကတည်းဖြတ်နိုင်ပါသည်။
relapse များအတွက် compulsive အသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်မှစက်လှေကားအစိတ်အပိုင်းအတွက်မူးယစ်ဆေး (နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှု) ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ခွန်အား၌ရရှိလာတဲ့ဆုလာဘ်စနစ်များ (က) တိုးမြှင့်မက်လုံးပေးာင်းဆက်စပ်နိုင် (49, 135), (ခ) (အစောပိုင်းဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်မှီခိုတိုးလာ45, 72); နှင့် (ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို impairing, norepinephrine ၏ာင်းသို့မဟုတ် reactivity ကိုတိုးမြှင့်54, 59, 60), နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးတွေကိုတိုးမြှင့် salience (62-64) ။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများတစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနဲ့အတူကိုလူတ္ထုများတစ်ခုလျော့နည်းသွားအကြိုက်ကိုပြပင်စဉ်တ္ထုများတိုးမြှင့် compulsive အသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
ယခင်သို့မဟုတ်ဆက်လက်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တ္ထုများဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း (မူးယစ်ဆေးဝါးများလိုသောထံမှ like နှိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ uncoupling, dopaminergic ဆုလာဘ်ယန္တရားများ၏နောက်ထပ်ာင်းဖို့အထောက်အကူ49, 135) ။ ာင်း၌ဤတိုးနောက်ထပ်သဘာဝကျကျလှုံ့ဆော်မှုဆုချီးဖို့ထက်တ္ထုများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာသက်ရောက်မှုအကြားသင်ယူ link ကိုခိုင်ခံ့စေနှင့် (ကြိုတင် Non-ဆုချီး) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု, ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမှ (အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု) ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. သိသာ salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု inducing နိုင် (ဥပမာ, အစားအစာသို့မဟုတ်ရငျးနှီး) ။ ဤသည်လှပသော Versace et al နေဖြင့်ရုပ်ပြခံခဲ့ရသည်။ , ပြခဲ့သူ, evoked အလားအလာသုံးပြီး (254) သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ် (255), နီကိုတင်းကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူစိတ်ခွန်အားနိုးသတင်းအချက်အလက်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအရင်းအမြစ်များတိုးပွားလာခွဲဝေညွှန်း, ဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်စီးကရက်အရိပ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်ကို Activation ခြီးမွှောကျပြီ။ မှိန်ဖျော့ activation သဘာဝကျကျကြိုးလှုံ့ဆော်မှုဆေးလိပ်သောက်-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်သို့သော်, လူတွေ, ဆေးလိပ်သောက်ညီမျှအာရုံကိုခွဲဝေနှင့်သဘာဝကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအရသိရသည်ပြွတ်နိုငျသညျ။ အဆုံးစွန်သောအုပ်စုသည်ယခင်အုပ်စုတစ်စုထက်ပြန်သွားကြသည်ဖို့တိုတောင်း latency ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြိုးသကျရော (တ္ထုများ၏အတွင်းမလွဲမသွေဆိုးကျိုးများပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့သူမြင့်မားတဲ့ရို Impulse နှင့်အတူလူအတွက်အားကောင်းစေခြင်းငှါ136) နှင့်အလားအလာစိတ်ဖိစီးမှု၏။ ဒါဟာအယူအဆရို Impulse (သို့ခြီးမွှောကျခဲ့ကြသူတစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူတို့တွင်မြင့်မားသောပစ္စည်းဥစ္စာ-cue-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်256); နောက်ပိုင်းတွင် relapse မှ predisposed မဟုတ်ဘဲမြင့်မားတဲ့ရို Impulse ထက်မြင့်မားသော cue-သွေးဆောင်တဏှာ, (257).
ထို့အပြင်ခုနှစ်, မှီခိုနှင့် relapse ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုကနေအကူးအပြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အားဖြည့်ယန္တယားထဲမှာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်နေဖြင့်မှတ်သားနိုင် (45, 72, 73, 258) ။ Koob စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တ္ထုများဟာ HPA ဝင်ရိုးကိုသက်ဝင်နှင့် recreationally တ္ထုများကိုအသုံးသူတွေကိုအတွက် amygdala ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်သည့် extrahypothalamic CRF များလွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်ရသောစံပြတွေ့ရမယ်။ ဒါကလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များနှင့် Non-မှီခိုပုံမှန်အသုံးပြုမှုများ၏အဆင့်ဆင့်အထိမ်းအမှတ်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစားသုံးမှုအကြားအပြုသဘောအားကောင်းအခြေခံစခွေငျးငှါ. ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, တ္ထုများအချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူ HPA ဝင်ရိုးလျော့နည်းတ္ထုများအားဖြင့် activated နှင့်အစားကလူစူးရှသို့မဟုတ်ကြာရှည်ဆုတ်ခွာတစ်ပြည်နယ်ဖြစ်သည့်အခါ activated ဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ ဒါကလိုက်ပါသွားအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် (အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်) နုတ်မှတဏှာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏ compulsive လိုတဲ့ပြည်နယ်အတွက် extrahypothalamic CRF အားဖြင့် amygdala ၏ activation ဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆုံးစွန်သောပြည်နယ်ဝင်ဦးနှောက်စနစ်များကိုမှီခိုအသုံးပြုခြင်းသည် non-မှီခိုအနေဖြင့်အကူးအပြောင်းကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ, အားဖြင့် (ကပစ္စည်းဥစ္စာအဘို့အလိုခငျြ compulsive မှအကူးအပြောင်းအရှိန်မြှင့်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှု CRF ခြီးမွှောနှင့် amygdala ကိုသက်ဝင်နိုင်သည့်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် potentiated စေခြင်းငှါ45, 72, 73, 258).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ noradrenergic စနစ်များကိုတုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် norepinephrine ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်, ပိုမိုထိခိုက်ဖြစ်လာနိုင် (59), စိတ်လှုပ်ရှားမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို (54, 59, 60), နှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များ (61), နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးသတင်းအချက်အလက်များအတွက်စူးရှသောဘက်လိုက်မှုတိုးမြှင့် (62-64), ထိခိုက်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်အကြံပြု။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုα1-adrenergic receptors (ရေလွှမ်းသဖြင့် prefrontal လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ် norepinephrine များ၏ကမောက်ကမဖြစ်စေရန်သက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြီ54, 55) ။ noradrenergic စနစ်များ sensitivity ကို၌ဤတိုး (ကိုကင်းနှင့်အတူလူများတို့အား, α2-adrenergic receptors antagonizing အားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတုယူထားတဲ့ yohimbine, စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်259), opioid (260, 261), သို့မဟုတ်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါ (262, 263) ။ Yohimbine 1-2 နှင့်အတူကင်းအသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်အတူလူအတွက် MHPG, norepinephrine ၏အဓိက metabolite နှင့်သွေးဆောင်ထိတ်တလန်တိုက်ခိုက်မှုများတိုးမြှင့် abstinence ၏ရက်ပေါင်း, ဒါပေမယ့်မရသူတို့2ခဲ့သည့်အခါအတူတူလူ abstinence ၏ရက်သတ္တပတ် (259) ။ ဤသည် noradrenergic စနစ်များတိုးချဲ့ sensitivity ကို2အတွက်လျော့နိုင်တယ်လို့အကြံပြု abstinence ၏ရက်သတ္တပတ်။ ဒီစိတ်ခံစားမှုစနစ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေခြင်းငှါပေမဲ့သို့သော်, norepinephrine (sensitized ဆက်လက်တည်ရှိခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ methadone ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် opioid မှီခိုနှင့်အတူလူအတွက် yohimbine-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်ထိတ်လန့်ခြင်းဖြင့်အကြံပြုသည်အခြားစနစ်များကိုထိခိုက်စေဟန်260, 261), နှင့် 2-4 သူအရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူအတွက်တိုးမြှင့်ထိတ်လန့် ပိုပြီးကြိုးစားမှုဆေးလိပ်ဖြတ်သူ abstinence ၏ရက်သတ္တပတ် (263).
ဂဏန်း Figure44 စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နာတာရှည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်မှီခိုနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကြားဆက်ဆံရေးတွေ့ရမယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း sensitized အဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းနိုင်သည့်ဆုလာဘ်စနစ်များ, (များ၏ပြင်းထန်သောာင်း: သုံးယန္တယားမှီခိုနေစဉ်အတွင်း stress- နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-သွေးဆောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် relapse အခြေခံစခွေငျးငှါ136), နှင့်အရာအဓိကအားဖြင့်ပေါ်ပေါက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလျှင်မြန်စွာကြိုတင်စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်နာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်မြင့်မားသော Impulse နှင့်အတူလူအတွက်မည် စိတ်ဖိစီးမှုယန္တရားများ၏ allostasis, အစားအပြုသဘောအားကောင်းထက်အပျက်သဘောအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်းကိုကားမောင်း; နှင့်ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားကိုထိခိုက်စေ, noradrenergic ယန္တရားများ၏ sensitivity ကိုခြီးမွှောကျ။ စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များာင်းသို့မဟုတ် reactivity ကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ပြည်သူ့မှီခိုဖို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာပိုပြီး relapses ရှိသည်ဖို့တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဖိအား, နာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့် တွဲဖက်. , အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ်မှီခိုဖို့ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်တိုးတက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်သည်မည်သို့မော်ဒယ်။ အလွဲသုံးစားမှုစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တ္ထုများအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များထပ်ခါတစ်လဲလဲ activation နိုင်ပါတယ် (ပုံ၏ညာဘက်ခြမ်း) ...
ဤစာတမ်းတွင်ကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကလေးဘဝနာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များကိုပိုမိုမကြာခဏဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်တ္ထုများကိုအသုံးသူတွေကိုပိုမိုနာတာရှည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထောက်ပံ့သောအခါစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ကြိုတင်သို့မဟုတ်ဆက်လက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များအသုံးပြုမှုကိုအစပျိုးရန်အန္တရာယ် (1) ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့နှင့်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာအသုံးပြုမှုကိုအစပျိုးရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ; (2) အသုံးပြုမှုကိုအရှိန်မြင့်လာတယ်နှင့်ထို့ထက် ပို. လျှင်မြန်စွာအသုံးပြုမှုမြင့်လာရန်, (3) ကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာ compulsive အသုံးပြုမှုကိုမှတိုးရန်, ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အောက်ပိုင်းလှုံ့ဆျောမှုရှိသည်ဖို့ (4); (5) ပိုမြန်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏ (ပြန်လည်) သက်တမ်းလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီရှိသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုယေဘုယျအားအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏အတန်းကိုဖြတ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စားပှဲ Table11 စွဲနာမကျန်း-သင်တန်းနှင့်ပတ်သက်သောငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အဆင့်တစ်သမိုင်းအကြားဆက်ဆံရေးကိုအကျဉ်းချုပ်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အခြားလေးနက်သောစိတ်ဒဏ်ရာ (အစောပိုင်း) ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုမှုအန္တရာယ်တိုးပွါးကြုံတွေ့ပြီးမှ, ပုံမှန်အသုံးပြုမှုမှအသွင်ကူးပြောင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, မှီခိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွါးနှင့်ချုံးသို့မဟုတ် relapse ဖို့အန္တရာယ် elevates ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သက်ရောက်မှုများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှကန့်သတ်သည်မဟုတ်လူကြီးသို့၎င်းတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုမှဆက်လက်။ သို့သော်အချို့ရလဒ်များကိုက်ညီမှုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, data ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏ပြင်းထန်မှု, ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည်။ အချို့သောလေ့လာမှုတွေသူတို့အား variable တွေကိုအချို့ကိုကြည့်ရှုသော်လည်း, အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားများအတွက်ဒေတာကန့်သတ်ထားပါသည်။
စားပှဲ Table22 အဓိကစိတ်ဖိစီးမှုတစ်သက်တာဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်နေ့စဉ်ကူညီပြီးနှင့်စွဲနာမကျန်း-သင်တန်းနှင့်ပတ်သက်သောအဆင့်အပါအဝင် Post-ကလေးဘဝအထပ်ထပ် / နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ, အကြားဆက်ဆံရေးကိုအကျဉ်းချုပ်။ နာတာရှည်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ, အသုံးပြုမှုကိုစတင်ရန်ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှပြောင်းလဲဖို့, မှီခိုဖို့အရှိန်မြင့်လာတယ်ရန်, အနိမ့်ဖြတ်ဖို့, လက်ခံပြီးမှအခွင့်အလမ်းသို့မဟုတ် relapse မှတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပါပြီ။ သူတို့အားအဆင့်ဆင့်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်တဏှာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးကကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုမှအကူးအပြောင်းနှင့် relapse အပေါ်သတင်းအချက်အလက်, အထူးသဖြင့်ပြန်သွားကြသည်ဖို့အချိန်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှုအတွက်အများအားဖြင့်နီကိုတင်း, အရက်, ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဂဏန်း Figure55 ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်အထပ်ထပ် / နာတာရှည် Post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များမပါဘဲနှင့်အတူလူတင်းမာမှုများ၏စွဲနာမကျန်း-သင်တန်းနှင့်အောင်းနေချိန်၏တင်းမာမှုများ၏အန္တရာယ်ကြားကအဆိုပြုထားတဲ့ဆကျဆံရေးတွေ့ရမယ်။ အထပ်ထပ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အတူပြည်သူ့အစောပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်နောက်ထပ်လူကြီးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူအထူးသဖြင့်, စွဲလမ်းဆီသို့အစာရှောင်မြင့်လာမှအမြင့်ဆုံးစွန့်စားမှုအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ တင်းမာမှုလျှော့ချ၏အန္တရာယ်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့အောင်းနေချိန်အသက်အရွယ်အတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါသော်လည်း, စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များာင်းအတိုင်းလိုက်နာရသည်။
တင်းမာမှုလျှော့ချ၏အန္တရာယ်နှင့်အောင်းနေချိန်မစိတ်ဖိစီးမှု (အနက်ရောင်လိုင်း), အနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု (မီးခိုးရောင်လိုင်း), နှင့်မြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှု (အနီလိုင်း) တို့အကြားယူဆချက်ဆက်ဆံရေး။ မြင့်မားသောစိတ်ဖိစီးမှုအစောပိုင်းအစောပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါမှ (လျင်မြန်) တင်းမာမှု (၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှပြောပြတယ် ...
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များကိုသက်ဝင်အလွဲသုံးစားမှုရှယ်ယာဘုံယန္တရားများ၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ။ စိတ်ဖိစီးမှုဝတ္ထုများကိုသုံးပါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အန္တရာယ်မှာကလူကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှင့်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များအတွက်အန္တရာယ်မှာလူတွေထားတော်မူ၏။
ကျနော်တို့လာမယ့်စွဲနာမကျန်း-သင်တန်းဇာတ်စင်မှတ္ထုများနှင့်တိုးတက်မှုသုံးစွဲဖို့အားနည်းချက်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာယန္တရားများကိုပေးအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များကိုဖြတ်ပြီးအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏အတန်းကိုဖြတ်ပြီးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ အပြည့်အဝမော်ဒယ်ပုံထဲမှာတင်ပြထားပါသည် Figure66.
ဖိအားများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ကနေမှီခိုနှင့် relapse မှတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုအပြည့်အဝမော်ဒယ်. (က) ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်အထပ်ထပ် / နာတာရှည် Post-ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ (အဖြစ်တ္ထုများ) ကိုသက်ဝင်နှင့် activation ပုံစံများကိုပြောင်းလဲ ...
ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးမြှင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ, သူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုဆက်စပ်ပေလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်မှာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, ဆင်းရဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ချ, ချို့ယွင်းအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသော Impulse တိုးတက်ရိုကဲ့သို့တိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စေ, တ္ထုများအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်နုတ်မနိုငျသောယုံကြည်ချက်စနစ်ဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ပုံမှန်သုံးတိုးတက်မှုပုံမှန်အသုံးပြုမှုတစ်ခုအစောပိုင်းကပြောင်းကုန်ပြီ inducing, တ္ထုများ၏အနိမ့်ဆေးများများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးတိုးမြှင့်, အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုမှဆုလာဘ်စနစ်များစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်၏ဆေးထိုးခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်တက်စေခြင်းငှါ စားသုံးမှု။ ဤသည်ယန္တရားအထက်ဖော်ပြထားတဲ့ရိုကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူအပြိုင်လည်ပတ်စေနိုင်သည်။ အသိမမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နောက်ထပ် modulated နိုငျသညျ။ အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်မှာာင်းဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့နေသောအဆင့်မြင့်ရို Impulse နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုမှု, မှီခိုနှင့် relapse များအတွက်အန္တရာယ်ဖို့အကူးအပြောင်း stress- နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-သွေးဆောင်ဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်ဆုလာဘ်ယန္တရားများ, စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် allostatic အပြောင်းအလဲများနှင့် amygdala-mediated အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးာင်းပိုမိုပြင်းထန်လာနှင့်များ၏ sensitivity ကိုသို့မဟုတ် reactivity ကိုတိုးမြှင့် noradrenergic စနစ်များကို။ ဤရွေ့ကားယန္တရားများအထက်တွင်ဖော်ပြထားရိုကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူအပြိုင်လည်ပတ်စေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်မှာာင်းဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့နေသောအဆင့်မြင့်ရို Impulse နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်နိုင်သည်။
လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးရလဒ်များထိုကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများအဖြစ်ပိုပြီးနာတာရှည်စိတ်ခံစားမှုဖိအားကိုပိုသိသာသက်ရောက်မှုရှိသည်ထင်ရပေမယ့်ဖိအား, နာမကျန်း-သင်တန်းမြင့်လာမှအများဆုံးပြင်းထန်အန္တရာယ်ရှိစေခြင်းငှါ, အရာနှငျ့ ပတျသကျ. ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ ဒုတိယ, စာပေအများစုမှာတ္ထုများ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုပိုမိုကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအရက်, ဆေးလိပ်သောက်, ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းရည်ရွယ်သည်။ တတိယအချက်သတင်းအချက်အလက်အထူးသဖြင့်အတွင်းအဆင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေနှင့်ဆက်စပ်သည်စွဲသံသရာ၏အခြားအဆင့်ထက်အချို့သောပိုမိုကန့်သတ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကအပန်းဖြေအခြေခံပေါ်မှာတ္ထုများ အသုံးပြု. လူစုထဲမှာလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအပေါ်ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်ကြောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့လာမှုများ stages အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။
Marijn Lijffijt, ဒီစက္ကူများ၏ concept ကိုတီထွင်စာပေရှာဖွေမှုများကို ပြု. , ပထမဦးဆုံးမူကြမ်းရေးသားခဲ့သည်။ Kesong ဟူနှင့်အလန် C. Swann စာပေပြန်ဆိုဖို့သိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်စွာအစောပိုင်းကမူကြမ်းဖတ်ပါနှင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပါပြီ။
1 ။ Grant က BF, Hasin DS, Chou SP, Stinson FS, Dawson DA ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနီကိုတင်းမှီခိုခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်: အရက်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားရေး epidemiological စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2004) 61: 1107-1510.1001 / archpsyc.61.11.1107 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
2 ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် 2012 အမျိုးသားစစ်တမ်းကနေရလာဒ်: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေ့ရှိချက်များ၏အနှစ်ချုပ်။ Rockville, MD: ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, (2013) ။
3 ။ Afifi ဖို့, Henriksen, CA, Asmundson GJG တစ်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြား Sareen ဂျေကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်။ 2012-57 [: J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (677) 86 နိုင်သလားPubMed]
4 ။ Anda RF, Felitti VJ, Bremner JD, Walker က JD, Whitfield ကို C, ပယ်ရီ bd, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်ဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများများ၏တည်မြဲဆိုးကျိုးများ။ neurobiology နှင့်ရောဂါကနေသက်သေအထောက်အထားတစ်ခု convergence ။ EUR Arch စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin neuroscience (2006) 256: 174-8610.1007 / s00406-005-0624-4 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
5 ။ Booker က C, Gallaher P ကို, Unger J ကို, Ritt-Olson တစ်ဦးက, ဂျွန်ဆင်အေဖိစီးမှုမြားဘဝဖြစ်ရပ်များ, ဆေးလိပ်သောက်အပြုအမူများနှင့်ဆဋ္ဌမတန်းကျောင်းသူလေးတစ်ဦး multiethnic နမူနာအကြားဆေးလိပ်သောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်။ Ethn ကနျြးမာရေး (2004) 9: 369-9710.1080 / 1355785042000285384 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
6 ။ ပေါ RM, Fairbank ဂျာ Marsden ME ။ စစ်ရေးအမျိုးသမီးများနှင့်လူတို့တွင်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (1999) 25: 239-5610.1081 / ADA-100101858 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
7 ။ Byrne DG, ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ဖိစီးမှု, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏အသုံးပြုမှု Mazanov ဂျေသတင်းရင်းမြစ်။ စိတ်ဖိစီးမှု Med (1999) 15: 215-27
8 ။ Carter, MA, Byrne DG ။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဧရိယာကို-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို: စိတ်ဖိစီးမှု, Self-လေးစားမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်။ Aust J ကို Psychol (2013) 65: 180-710.1111 / ajpy.12019 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
9 ။ Clark က DB, Lesnick L ကို, Hegedus လေး။ စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အခြားဆိုးရွားသောဘဝဖြစ်ရပ်များ။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု (1997) 36: 1744-5110.1097 / 00004583-199712000-00023 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
10 ။ အေး CR, Chassin အယ်လ်အဆိုပါစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အပျက်သဘောဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှုပုံစံနှင့်အမူအကျင့် undercontrol ၏စိစစ်သက်ရောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး (1993) 54: 326-33 [PubMed]
11 ။ Croghan ငါ Bronars ကို C, Patten, CA, Schroeder DR, Nirelli LM, Clark က MM, et al ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို, ကျေနပ်မှု, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် Self-တန်ဖိုးထားမှဆက်စပ်ဆေးလိပ်သလဲ? နံနက် J ကိုကနျြးမာရေးပြုမူနေ (2006) 30: 322-3310.5993 / AJHB.30.3.10 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
12 ။ Cuomo ကို C, Sarchiapone M က, Giannantonio MD, မန်စီနီက M, ရွိုင်းအေမှထုတ်ပြန်သော, Impulse, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲနှင့်အတူအကျဉ်းသားများကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2008) 34: 339-4510.1080 / 00952990802010884 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
13 ။ Dube SR, Felitti VJ သည် Dong M က, ချပ်မန်း DP, Giles WH, Anda RF ။ ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှု, လျစ်လျူရှုနှင့်အိမ်ထောင်စုကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အန္တရာယ်: အဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများလေ့လာမှု။ ကလေးအထူးကု (2003) 111: 564-7210.1542 / peds.111.3.564 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
14 ။ Fenton MC, Geier T က, Keyes K ကို Skodol AE, Grant က BF, Hasin DS ။ အရက်မှီခိုများအတွက်အန္တရာယ်အတွက်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့, မိသားစုသမိုင်းနှင့်ကျား, မများပေါင်းလိုက်သောအခန်းကဏ္ဍ။ Psychol Med (2013) 43: 1045-5710.1017 / S0033291712001729 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
15 ။ အစိမ်းရောင် JG, McLaughlin Ka, Berglund PA ဆိုပြီး, Gruber MJ, Sampson NA, Zaslavsky လေး, et al ။ အမျိုးသား comorbidity စစ်တမ်းပွားအတွက်ကလေးဘဝအခကျအခဲမြားနှငျ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါမမှန်ငါ: DSM-IV မမှန်၏ပထမဦးဆုံးစတင်ခြင်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2010) 67: 113-2310.1001 / archgenpsychiatry.2009.186 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
16 ။ Guthrie BJ, Young ကလေး, ဘှိုငျဒျ CJ, Kintner ek ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အာဖရိက-အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ: နေ့စဉ်ကူညီပြီးနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး (2001) 29: 109-1510.1016 / S1054-139X (01) 00219-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
17 ။ Kendler KS, Bulik CM, Silberg J ကို, Hettema JM, Myers J ကို, Prescott CA. အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်: တစ်ခု epidemiological နှင့် cotwin ထိန်းချုပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2000) 57: 953-910.1001 / archpsyc.57.10.953 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
18 ။ McLaughlin Ka, Greif အစိမ်းရောင် J ကို, Gruber MJ, Sampson NA, Zaslavsky လေး, Kessler RC ။ ကလေးဘဝအခကျအခဲနှင့်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်တစ်အမျိုးသားရေးနမူနာအတွက်စိတ်ရောဂါမမှန်၏ပထမဦးဆုံးစတင်ခြင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2012) 69: 1151-6010.1001 / archgenpsychiatry.2011.2277 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
19 ။ Kessler RC, McLaughlin Ka, အစိမ်းရောင် JG, Gruber MJ, Sampson NA, Zaslavsky လေး, et al ။ အဆိုပါ WHO ကကမ္ဘာ့အစိတ်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းများအတွက်ကလေးဘဝအခကျအခဲမြားနှငျ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ psychopathology ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2010) 197: 378-8510.1192 / bjp.bp.110.080499 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
20 ။ Molnar, buka SL, Kessler RC BE ။ child sexual abuse နှင့်နောက်ဆက်တွဲ psychopathology: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Comorbidity လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ နံနက် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (2001) 91: 753-6010.2105 / AJPH.91.5.753 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
21 ။ ပင်ဖြစ်သည် AF, Frank B, Ellenbroek B, Cool တစ်ဦးက, de Jong က, CA, Buitelaar JK, et al ။ COMT Val158Met အရက်မှီခိုများ၏အန္တရာယ်အပေါ်ကလေးဘဝဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု modulates ။ စှဲလမျးသူ Biol (2013) 18: 344-5610.1111 / j.1369-1600.2012.00438.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
22 ။ Schwandt ML, Heilig M က, Hommer DW, ဂျော့ခ်ျ၎င်းကို, Ramchandani VA သို့။ လူကြီးအတွက်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့မှုနှင့်အရက်မှီခိုပြင်းထန်မှု: စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုပြင်းထန်မှုနှင့် neuroticism နေဖြင့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေ။ အရက် Clin Exp Res (2013) 37: 984-9210.1111 / acer.12053 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
23 ။ Wilsnack SC, Vogeltanz ND, Klassen အေဒီ, Harris က TR ။ ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု: အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်များ။ J ကိုလုံးအရက် (1997) 58: 264-71 [PubMed]
24 ။ Perkonigg တစ်ဦးက, et al Goodwin က RD, Fiedler တစ်ဦးက, Behrendt S က, Beesdo K ကို Lieb R ကို။ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏သဘာဝဟုတ်ပါတယ်, အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခို။ စွဲလမ်း (2008) 103: 439-4910.1111 / j.1360-0443.2007.02064.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
25 ။ Kingston က S, Raghavan C. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်များနှင့် PTSD မှဆယ်ကျော်သက်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကိုစိတ်ဒဏ်ရာစိတ်ဖိစီးမှု (2009) 22: 65-810.1002 / jts.20381 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
26 ။ Balk အီး, DSM-IV နီကိုတင်းမှီခိုခြင်းနှင့်အရက်သေစာနှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားရေး epidemiological စစ်တမ်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များအကြား Lynskey MT, Agrawal အေအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2009) 35: 85-9010.1080 / 00952990802585430 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
27 ။ Dawson DA, Grant က BF, Ruan WJ ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သောက်သုံးရေအကြားအသင်းအဖွဲ့: ကျား, မများနှင့်အားနည်းချက်များ၏သက်ရောက်မှုများပြုပြင်မွမ်းမံ။ အရက်အရက် (2005) 40: 453-6010.1093 / alcalc / agh176 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
28 ။ Siqueira L ကို, Diab M က, Bodian ကို C, Rolnitzky အယ်လ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဆေးလိပ်သောက်ဖြစ်လာ: စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်နည်းလမ်းများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး (2000) 27: 399-40810.1016 / S1054-139X (00) 00167-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
29 ။ Koolhaas JM, Bartolomucci တစ်ဦးက, Buwalda B, et al de Boer SF, Flügge, G, Korte သည် SM ။ စိတ်ဖိစီးမှု revisited: စိတ်ဖိစီးမှုအယူအဆ၏အရေးပါသောအကဲဖြတ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ (2011) 35: 1291-30110.1016 / j.neubiorev.2011.02.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
30 ။ Dickerson အက်စ်အက်စ်, Kemeny ME ။ acute ဖိအားနဲ့ Cortisol တုံ့ပြန်မှု: ဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနတစ်ခုသီအိုရီပေါင်းစည်းမှုနှင့်ပေါင်းစပ်။ Psychol Bull (2004) 130: 355-9110.1037 / 0033-2909.130.3.355 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
31 ။ Schommer NC, Hellhammer DH, Kirschbaum C. Dissociation ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုဖို့ hypothalamus-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့်စာနာ-adrenal-medullary စနစ်၏ reactivity ကိုအကြား။ Psychosom Med (2003) 65: 450-6010.1097 / 01.PSY.0000035721.12441.17 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
32 ။ McEwen BS ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေ၏ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် neurobiology: ဦးနှောက်၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ဗြာ (2007) 87: 873-90410.1152 / physrev.00041.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
33 ။ Dedovic K ကိုဒူတစ်ဦးက, Andrews က J ကို, Engert V ကို, Pruessner JC ။ ဦးနှောက်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုး: စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် cortisol စည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Neuroimage (2009) 47: 864-7110.1016 / j.neuroimage.2009.05.074 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
34 ။ Herman JP, Cullinan WE ။ စိတ်ဖိစီးမှု Neurocircuitry: အ hypothalamo-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏အလယ်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience (1997) 20: 78-8410.1016 / S0166-2236 (96) 10069-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
35 ။ Herman JP, Figueiredo H ကို, Mueller NK, Ulrich-လိုင် Y ကို, et al Ostrander MM, Choi, DC, ။ စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှု၏ဗဟိုယန္တရားများ: hierarchical circuitry hypothalamo-pituitary-adrenocortical တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်။ တပ်ဦး Neuroendocrinol (2003) 24: 151-8010.1016 / j.yfrne.2003.07.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
36 ။ Herman JP, Flak J ကို, အ hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွက် Jankord R. နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု plasticity ။ prog ဦးနှောက် Res (2008) 170: 353-6410.1016 / S0079-6123 (08) 00429-9 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
37 ။ Dallman MF ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏စိတ်ဖိစီးမှု update ကိုလိုက်လျောညီထွေ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Endocrinol Metab (1993) 4: 62-910.1016 / S1043-2760 (05) 80017-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
38 ။ ဓာတ်ခွဲခန်း setting တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနိုင်ပြီး acute Foley P ကို, Kirschbaum C. လူ့ hypothalamus-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ (2010) 35: 91-610.1016 / j.neubiorev.2010.01.010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
39 ။ et al McRae-Clark က AL, Carter က RE, စျေး KL, Baker NL, သောမတ်စ်က S, Saladin ME ။ ဆေးခြောက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် Stress- နှင့် cue-ရူးနှမ်းတဏှာနှင့် reactivity ကို။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 218: 49-5810.1007 / s00213-011-2376-3 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
40 ။ Buchanan TW, Tranel: D, Kirschbaum C. Hippocampal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလူသားတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုဖို့ cortisol တုံ့ပြန်မှု abolishes ။ Horm ပြုမူနေ (2009) 56: 44-5010.1016 / j.yhbeh.2009.02.011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
41 ။ Pruessner JC, Dedovic K သည်, et al Khalili-Mahani N ကို, Engert V ကို, Pruessner M က, Buss ကို C ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများ: စူးရှသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း limbic စနစ်၏ Deactivate ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2008) 63: 234-4010.1016 / j.biopsych.2007.04.041 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
42 ။ Pruessner JC, Dedovic K ကို Pruessner M က, သခင်ကို C, Buss ကို C, Collins က L ကို, et al ။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်း: လူ့လူဦးရေအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား - 2008 Curt ငလျင်ဆုဆုရှင်ပါ။ Psychoneuroendocrinology (2010) 35: 179-9110.1016 / j.psyneuen.2009.02.016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
43 ။ Buchanan TW, Driscoll: D, Mowrer သည် SM, Sollers JJ, III ကို, ယော JF, Kirschbaum ကို C, et al ။ Medial prefrontal cortex ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွဲပြားခြားနားဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုသက်ရောက်သည်။ Psychoneuroendocrinology (2010) 35: 56-6610.1016 / j.psyneuen.2009.09.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
44 ။ MacLullich လေး, ဖာဂူဆန် KJ, Wardlaw JM, Starr JM, Deary IJ, Seckl JR ။ သေးငယ်လက်ဝဲ anterior cingulate cortex volumes ကိုကျန်းမာသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားများတွင်ချို့ယွင်း hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ J ကို Clin Endocrinol Metab (2006) 91: 1591-410.1210 / jc.2005-2610 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
45 ။ Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala နှင့်စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကို။ ဦးနှောက် Res (2009) 1293: 61-7510.1016 / j.brainres.2009.03.038 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
46 ။ Smith က SM, ခြိုငျ့ WW ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience (2006) 8: 383-95 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47 ။ မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်း, ဘုံရလဒ်ကို: စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏ Armario အေ Activation ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ (2010) 31: 318-2510.1016 / j.tips.2010.04.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
48 ။ လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ stimulant မှ Leyton အမ်အခြေအနေများနှင့်ထိခိုက်တုံ့ပြန်မှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2007) 31: 1601-1310.1016 / j.pnpbp.2007.08.027 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
49 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်း။ Annu ဗြာ Psychol (2003) 54: 25-5310.1146 / annurev.psych.54.101601.145237 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
50 ။ ဝမ် B, Shaham Y ကို, Zitzman: D, Azari က S, ပညာရှိ RA, သင် ZB ။ မူးယစ်ဆေးရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အတွက်အခန်းကဏ္ဍ: ကင်းအတွေ့အကြုံကို corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့် midbrain အချိုမှုများနှင့် dopamine ထိန်းချုပ်တည်စေ။ J ကို neuroscience (2005) 25: 5389-9610.1523 / JNEUROSCI.0955-05.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
51 ။ ဝမ် B က, သင် ZB, ဆန် KC, ပညာရှိ RA ။ ကိုကင်းရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: အ CRF များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ (2) အဲဒီ receptor နှင့်ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာ၌ CRF-binding ပရိုတိန်း။ Psychopharmacology (Berl) (2007) 193: 283-9410.1007 / s00213-007-0782-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
52 ။ Pruessner JC, ရှန်ပိန်က F, Meaney MJ တစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားတွေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အစောပိုင်းဘဝမိခင်စောင့်ရှောက်မှုက၎င်း၏ဆက်ဆံရေးတုန့်ပြန် Dagher အေ Dopamine လွှတ်ပေးရန်: [11C] raclopride သုံးပြီး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ J ကို neuroscience (2004) 24: 2825-3110.1523 / JNEUROSCI.3422-03.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
53 ။ Nikulina EM, Lacagnina MJ, Fanous S က, ဝမ် J ကို, Hammer RP ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု mesocorticolimbic ΔFosB / BDNF Co-expression ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ corticotegmental အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်: psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက်ဆိုလို။ neuroscience (2012) 212: 38-4810.1016 / j.neuroscience.2012.04.012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
54 ။ Allen ကအေပီ, ကနေဒီ PJ, Cryan JF, Dinan TG, Clarke G. အဇီဝဗေဒနှင့်လူသားအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားများ: အ Trier လူမှုစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်အာရုံစိုက်ပါ။ neuroscience Biobehav ဗြာ (2014) 38: 94-12410.1016 / j.neubiorev.2013.11.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
55 ။ Arnsten AF ။ prefrontal cortex ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအယှက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းအချက်ပြစိတ်ဖိစီးမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience (2009) 10: 410-2210.1038 / nrn2648 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
56 ။ အဆိုပါ locus coeruleus မှာသရုပ်ဆောင် Devilbiss DM, Waterhouse bd, Berridge CW, Valentino R. Corticotropin-releasing အချက် thalamic နှင့် cortical အာရုံခံ-evoked တုံ့ပြန်မှု disrupts ။ Neuropsychopharmacology (2012) 37: 2020-3010.1038 / npp.2012.50 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
57 ။ Curtis AL, Lechner သည် SM, Pavcovich LA က, Valentino RJ ။ corticotropin-releasing အချက်၏ intracoerulear microinfusion အားဖြင့် locus coeruleus noradrenergic စနစ်၏ activation: ဥတုနှုန်း cortical norepinephrine အဆင့်ဆင့်နှင့် cortical electroencephalograph လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther (1997) 281: 163-72 [PubMed]
58 ။ Smagin Gn, Swiergiel AH, Dunn AJ ။ Corticotropin-releasing အဆိုပါ locus coeruleus သို့အုပ်ချုပ်အချက်, ဒါပေမယ့်မ parabrachial နျူကလိယက, prefrontal cortex အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်။ ဦးနှောက် Res Bull (1995) 36: 71-610.1016 / 0361-9230 (94) 00166-X ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
59 ။ Swann AC အ, Lijffijt M က, ယာဉ်ကြော SD က, ကော့ခ, Steinberg JL, Moeller အပြည်ပြည်သွား။ Norepinephrine နှင့် Impulse: စူးရှ yohimbine ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) (2013) 229: 83-9410.1007 / s00213-013-3088-7 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
60 ။ et al Nagano-Saito တစ်ဦးက, Dagher တစ်ဦးက, Booij L ကို, ကျောက်စရစ် P ကို, Welfeld K ကိုကာဇီ KF ။ လူ့ medial prefrontal cortex အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် - ကျန်းမာသန်စွမ်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် 18F-fallypride / ပေလေ့လာမှု။ synapses (2013) 67: 821-3010.1002 / syn.21700 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
61 ။ Schwabe L ကို, Wolf ကညီလေး။ ဆာအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မော်ဂျူ: ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထားရာမှလုပ်ဆောင်ချက်လေ့ထိန်းချုပ်မှုရန်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res (2011) 219: 321-810.1016 / j.bbr.2010.12.038 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
62 ။ Esterman M က, DeGutis J ကို, et al mercado R ကို, Rosenblatt တစ်ဦးက, Vasterling JJ, Milberg W က။ စိတ်ဖိစီးမှု-related စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအမြင်အာရုံအဓိက distractors ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့အာရုံကိုဖမ်းယူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ J ကို Int Neuropsychol Soc (2013) 19: 835-4010.1017 / S135561771300057X [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
63 ။ Lee က TH, Itti L ကို, သိမှုဆိုင်ရာအာရုံသင်ယူမှုအတွက် arousal-biased ယှဉ်ပြိုင်ဘို့ Mather အမ်အထောက်အထား။ တပ်ဦး Psychol (2012) 3: 241.10.3389 / fpsyg.2012.00241 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
64 ။ Ventura R ကို, Latagliata EC, Morrone ကို C, la Mela ငါ Puglisi-Allegra အက်စ် Prefrontal norepinephrine "မြင့်သော" စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ PLoS One (2008) 3: e3044.10.1371 / journal.pone.0003044 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
65 ။ Heim ကို C, Newport DJ သမား, Wagner: D, Wilcox MM, Miller က AH, Nemeroff သမဝါယမ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် neuroendocrine စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို၏ခန့်မှန်းချက်များတွင်အစောပိုင်းဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံနှင့်လူကြီးစိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို: တစ်မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ပူပန်စိတ်ကျရောဂါ (2002) 15: 117-2510.1002 / da.10015 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
66 ။ et al Dias-Ferreira, E, Sousa JC, Melo အဘိဓါန်ငါ Morgado P ကို, Mesquita AR, Cerqueira JJ ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု frontostriatal ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စေသည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းသက်ရောက်သည်။ သိပ္ပံ (2009) 325: 621-510.1126 / science.1171203 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
67 ။ Leuner B, Frederick PJ, Nealer ကို C, Albin-Brooks C. နာတာရှည်ကိုယ်ဝန်စိတ်ဖိစီးမှုဟာကိုရွှေ့ဆိုင်ကာလအတွင်း prefrontal cortex ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို medial အပြုအမူများနှင့်လိုက်လျောကဲ့သို့ depressive စေပါတယ်။ PLoS One (2014) 9: e89912.10.1371 / journal.pone.0089912 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
68 ။ Ridderinkhof KR, Ullsperger M က, Crone EA ၏, Nieuwenhuis အက်စ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် medial တိုကျရိုကျ cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ (2004) 306: 443-710.1126 / science.1100301 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
69 ။ Ridderinkhof KR, ဗန်တွင်း Wildenberg WP, Segalowitz SJ, Carter က CS ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ် Neurocognitive ယန္တရားများ: action ကိုရွေးချယ်ရေးအတွက် prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ, တုံ့ပြန်မှုတားစီး, စွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှု။ ဦးနှောက် Cogn (2004) 56: 129-4010.1016 / j.bandc.2004.09.016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
70 ။ ဟတ် H ကို, ကလေးအလွဲသုံးစားမှုရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K. Neuroimaging: အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ တပ်ဦး Hum neuroscience (2012) 6: 52.10.3389 / fnhum.2012.00052 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
71 ။ Saal: D သည် Dong Y ကို, Bonci တစ်ဦးက, Malenka RC ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ (2003) 37: 577-8210.1016 / S0896-6273 (03) 00021-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
72 ။ Koob, G, Kreek MJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ dysregulation နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2007) 164: 1149-5910.1176 / appi.ajp.2007.05030503 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
73 ။ Koob gf, Le Moal အမ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းအတွက်ပြိုင်ဘက်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအဘို့အ Neurobiological ယန္တရားများ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ (2008) 363: 3113-2310.1098 / rstb.2008.0094 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
74 ။ Heim ကို C, Newport DJ သမား, Heit S က, ဂရေဟမ် YP, Wilcox M က, Bonsall R ကို, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုပြီးနောက်အမျိုးသမီးစိတ်ဖိစီးမှုမှ Pituitary-adrenal နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှု။ ဂျေအေအမ်အေ (2000) 284: 592-710.1001 / jama.284.5.592 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
75 ။ Otte ကို C, Neylan TC, ဝင်ရိုးစွန်း N ကို, Metzler T က, အကောင်းဆုံးက S, Henn-Haas ကို C, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ရဲအကယ်ဒမီတပ်သားသစ်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှ catecholamines တုံ့ပြန်မှုအကြားအသင်းမှ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2005) 57: 27-3210.1016 / j.biopsych.2004.10.009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
76 ။ Benjet ကို C, Borg, G, မက်ဒီနာ-Mora ME, Blanco J ကို, Zambrano J ကို, Orozco R ကို, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအခွင့်အလမ်းများနှင့်မက္ကစီကိုစီးတီးမြို့ပြဧရိယာကနေဆယ်ကျော်သက်အကြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှအကူးအပြောင်း။ 2007-90 / j.drugalcdep.128 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (3410.1016) 2007.02.018 ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
77 ။ Crum RM, Lillie-Blanton M က, အန်သိုနီ JC ။ ရပ်ကွက်အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကိုကင်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်း။ 1996-43 / S155-6110.1016 (0376) 8716-96 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (01298)7ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
78 ။ Benjet ကို C, Borg, G, မက်ဒီနာ-Mora ME, Méndezအီးနာတာရှည်ကလေးဘဝဒုက္ခနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အဆင့်ဆင့်။ 2013-131 / j.drugalcdep.85 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (9110.1016) 2012.12.002 ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
79 ။ Freeman က RC, Collier K ကို Parillo KM ။ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အန္တရာယ်မြင့်မှာလူထုစုဆောင်းအမျိုးသမီးနမူနာများတွင်အက်ကွဲကင်းအသုံးပြုမှုများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ငယ်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2002) 28: 109-3110.1081 / ADA-120001284 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
80 ။ Heffernan K ကို Cloitre M က, Tardiff K ကို Marzuk pm တွင်, Portera L ကို, လီယွန်, AC ။ စိတ်ရောဂါလူနာအတွက်တစ်သက်တာ opiate အသုံးပြုမှုကိုတစ် Correlate အဖြစ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2000) 25: 797-80310.1016 / S0306-4603 (00) 00066-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
81 ။ Kilpatrick DG, Acierno R ကို, Saunders B, Resnick HS, အကောင်းဆုံး CL, Schnurr PP ။ ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှုအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ: တစ်အမျိုးသားရေးနမူနာအနေဖြင့်ဒေတာများ။ 2000-68 / 19-3010.1037X.0022 [: J ကို Clin Psychol (006) 68.1.19 တိုင်ပင်ပါPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
82 ။ မာရှယ် bd, Wood ကအီး, ဂေါ်ပြားဂျာ Buxton ဂျာ Montaner JS, Kerr T. တစ်ဦးချင်း, လူမှုရေးနှင့်စိတ်ကြွဆေးဆေးထိုးစတင်နှင့်ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုများနှင့် HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးမဟာဗျူဟာများ။ prev သိပ္ပံ (2011) 12: 173-8010.1007 / s11121-010-0197-y က [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
83 ။ Ompad, DC, Ikeda RM, Shah က N ကို, Fuller CM, Bailey က S, Morse ကအီး, et al ။ ဆေးထိုးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စတင်မှာကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အသက်အရွယ်။ နံနက် J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (2005) 95: 703-910.2105 / AJPH.2003.019372 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
84 ။ ရွိုင်း, E, Haley N ကို, Leclerc P ကို, Cédras L ကို, Blais L ကို, Boivin JF ။ စတင်များခန့်မှန်း: Montreal တွင်လမ်းပေါ်လူငယ်များအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုး။ J ကိုမြို့ပြကျန်းမာရေး (2003) 80: 92-10510.1093 / jurban / jtg092 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
85 ။ Sartor အီး, Lynskey MT, Bucholz KK, McCutcheon VV, နယ်လ်ဆင် EC, Waldron M က, et al ။ ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရက်မှီခိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်တန်း: အမျိုးသမီးအမွှာနမူနာကနေတွေ့ရှိချက်။ 2007-89 / j.drugalcdep.139 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (4410.1016) 2006.12.022 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
86 ။ Sullivan က TN, Kung-EM, Farrell အေဒီ။ အကာအကွယ်အချက်များအဖြစ်မိဘစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်မိသားစုပံ့ပိုးကူညီမှု: ကျေးလက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစတင်သက်သေခံအကြားဆက်ဆံရေး။ J ကို Clin ကလေးမြီးကောင်ပေါက် Psychol (2004) 33: 488-9810.1207 / s15374424jccp3303_6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
87 ။ Brems ကို C, ဂျွန်ဆင် ME, Neal: D, detoxification န်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြား Freemon အမ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုသမိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2004) 30: 799-82110.1081 / ADA-200037546 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
88 ။ Brems ကို C, Namyniuk အယ်လ်ကာ Alaska နမူနာအတွက်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုသမိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း (2002) 37: 473-9410.1081 / Ja-120002806 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
89 ။ Jarvis တီဂျေ, Copeland J ကို, ဝေါ်လ်တန်အယ်လ်မိန်းမတကာတို့ထက်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်ဆံရေး၏သဘောသဘာဝ Exploring ။ စွဲလမ်း (1998) 93: 865-7510.1046 / j.1360-0443.1998.9368658.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
90 ။ Kecojevic တစ်ဦးက, et al Wong က CF, Schrager သည် SM, ဆေးလ်ဗား K ကို Bloom JJ, Iverson အီး။ ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုသို့စတင်: Los Angeles မြို့နှင့် New York မှာလိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, လိင် (လိင်တူချစ်သူ) နှင့်လိင်ကွဲ High-အန္တရာယ်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအကြားကွဲပြားခြားနားမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2012) 37: 1289-9310.1016 / j.addbeh.2012.06.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
91 ။ လီ T က, ဒူ J ကို, ယုက S, Jiang H ကို, ဖူ Y ကို, ဝမ်: D, et al ။ ဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုစတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်မှလမ်းကြောင်း: အ COMT ဗီဇ, Impulse နှင့်ကလေးဘဝကိုစိတ်ဒဏ်ရာများ၏ဆက်ဆံရေးရှာဖွေစူးစမ်းတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံချဉ်းကပ်။ PLoS One (2012) 7: e48735.10.1371 / journal.pone.0048735 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
92 ။ Chauhan P ကို, Widom CS ။ အလယ်တန်းလူကြီးအတွက်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု: ရပ်ကွက်အတွင်းဝိသေသလက္ခဏာများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ dev Psychopathol (2012) 24: 723-3810.1017 / S0954579412000338 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
93 ။ McFarlane တစ်ဦးက, Clark က CR, et al Bryant RA, Williams က LM, Niaura R ကိုပေါလုသည် RH အ။ 740 Non-လက်တွေ့ဘာသာရပ်များအတွက် psychophysiological, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစီအမံအပေါ်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို။ J ကို Integrated neuroscience (2005) 4: 27-4010.1142 / S0219635205000689 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
94 ။ ဗွန် Sydow K ကို Lieb R ကို, Pfister H ကို, Höfler M က, Wittchen Hu ။ အဘယ်အရာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်မှီခိုဖို့ဆေးခြောက်များနှင့်တိုးတက်မှု၏အဖြစ်အပျက်အသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်း? မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများတစ်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက်အန္တရာယ်အချက်များတစ်4နှစ်အလားအလာစာမေးပွဲ။ 2002-68 / S49-6410.1016 (0376) 8716-02 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (00102)3ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
95 ။ Keyes KM, Hatzenbuehler ML, Hasin DS ။ စိတ်ဖိစီးမှုဘဝအတွေ့အကြုံများ, အရက်သောက်ခြင်း, အရက်သေစာအသုံးပြုမှုမမှန်: ဖိအားလေးခုအဓိကအမျိုးအစားများများအတွက် epidemiological သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 218: 1-1710.1007 / s00213-011-2236-1 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
96 ။ Unger JB, Hamilton က je, Sussman အက်စ်မြီးကောင်ပေါက်အကြားဆေးလိပ်တစ်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်တစ်ဦးကမိသားစုဝင်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အအရှုံး။ ကနျြးမာရေး Psychol (2004) 23: 308-1310.1037 / 0278-6133.23.3.308 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
97 ။ ဗန်တွင်း Bree ကို MB, Whitmer MD, Pickworth သည့် WB ။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏လူဦးရေ-based နမူနာဖွံ့ဖြိုးရေးဆေးလိပ်၏ခန့်မှန်း: တစ်အလားအလာလေ့လာမှု။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး (2004) 35: 172-8110.1016 / S1054-139X (03) 00542-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
98 ။ Carvajal SC, Granillo TM အလိုအလျောက်။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆေးလိပ်သောက်စတင်များ distal နှင့် Proximity ပြဋ္ဌာန်းတစ်ဦးကအလားအလာစမ်းသပ်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2006) 31: 649-6010.1016 / j.addbeh.2005.05.047 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
99 ။ Finkelstein DM, Kubzansky ld, Goodman အီးလူမှုရေးအခြေအနေ, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး (2006) 39: 678-8510.1016 / j.jadohealth.2006.04.011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
100 ။ Kirby JB ။ Single-မိဘမိသားစုများထံမှ stepfamilies မှဆယ်ကျော်သက်အရက်စတင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အကူးအပြောင်းဖြစ်သနည်း J ကို Fam ကိစ္စများ (2006) 27: 685-71110.1177 / 0192513X05284855 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
101 ။ Bruijnzeel AW ။ ဆေးရွက်ကြီးစွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ၏ dysregulation ။ neuroscience Biobehav ဗြာ (2012) 36: 1418-4110.1016 / j.neubiorev.2012.02.015 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
102 ။ Schmid B, Blomeyer: D, Treutlein J ကို, Zimmermann အမေရိကန်, ဘက်ချမန်း AF, Schmidt က MH, et al ။ CRHR1 ဗီဇနှင့် 19 နှစ်အရွယ်အကြားအရက်သောက်စတင်များနှင့်တိုးတက်မှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြန်အလှန်။ int J ကို Neuropsychopharmacol (2010) 13: 703-1410.1017 / S1461145709990290 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
103 ။ McCarty, CA, Rhew IC, Murowchick အီး, McCauley အီး, အလယ်တန်းကျောင်းနေစဉ်အတွင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်များ Vander Stoep အေစိတ်ခံစားမှုကျန်းမာရေးခန့်မှန်း။ Psychol စွဲပြုမူနေ (2012) 26: 351-710.1037 / a0025630 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
104 ။ Korhonen T က, Huizink AC အ, Dick DM, Pulkkinen L ကို, နှင်းဆီ RJ, ဆေးခြောက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ဦးချင်း, သက်တူရွယ်တူများနှင့်မိသားစုအချက်များ၏ Kaprio ဂျေအခန်းက္ပ: ဖင်လန်ဆယ်ကျော်သက်အမွှာအကြားတစ်ဦး longitudinal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ 2008-97 / j.drugalcdep.33 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (4310.1016) 2008.03.015 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
105 ။ Fite PJ, Wynn P ကို, Lochman je, ဝဲလ် KC ။ အစောပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်အပေါ်ရပ်ကွက်အတွင်းအားနည်းချက်နှင့်ရိပ်မိမရရှိခြင်း၏၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2009) 34: 769-7110.1016 / j.addbeh.2009.05.002 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
106 ။ DeWit DJ သမား။ မကြာခဏကလေးဘဝပထဝီနေရာပြောင်းရွှေ့: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစတင်များနှင့်အရက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအကြားကတခြားမူးယစ်ဆေး-related ပြဿနာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (1998) 23: 623-3410.1016 / S0306-4603 (98) 00023-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
107 ။ ကိုကင်းဆေးထိုးခြင်းနှင့်မကြာခဏကင်း injectors ၏ဆက်စပ်မှုသို့လွိုက်-Smith ကအီး, Wood ကအီးလီ K ကို Montaner JS, Kerr တီအဖြစ်အပျက်နှင့်စတင်များပြဌာန်းခွင့်။ 2009-99 / j.drugalcdep.176 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (8210.1016) 2008.07.003 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
108 ။ ယောက်ျားလေးများတစ်ဦးက, Farrell M က, Bebbington P ကို, Brugha T က, et al Coid J ကို, Jenkins R ကို။ ထောင်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စတင်: အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားရေးထောင်ထဲမှာစစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို။ စွဲလမ်း (2002) 97: 1551-6010.1046 / j.1360-0443.2002.00229.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
109 ။ Byrne DG, Byrne AE, Reinhart MI ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စီးကရက်ဆေးလိပ်စတငျဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်။ J ကို Psychosom Res (1995) 39: 53-6210.1016 / 0022-3999 (94) 00074-F [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
110 ။ Nichter M က, Nichter M က, Vuckovic N ကို, Quintero, G, Ritenbaugh C. ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများကြားတွင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များနှင့်စတင် Smoking: အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်တွေ့ရှိချက်။ တောဘထိန်းချုပ်ရေး (1997) 6: 285-9510.1136 / tc.6.4.285 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
111 ။ Tschann JM, Adler NE, Irwin အီး, Jr က Millstein စင်ကာပူဒေါ်လာ, Turner RA, Kegeles သည် SM ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်: pubertal အချိန်ကိုက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ကနျြးမာရေး Psychol (1994) 13: 326-3310.1037 / 0278-6133.13.4.326 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
112 ။ Kaplow JB, Curran PJ, Angold တစ်ဦးက, Costello EJ ။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရက်သုံးစွဲခြင်း၏စတင်၏ရှုထောင့်အကြားရှိအလားအလာစပ်လျဉ်း။ J ကို Clin ကလေး Psychol (2001) 30: 316-2610.1207 / S15374424JCCP3003_4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
113 ။ Smith က DG, Xiao L ကို, ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အောင် Bechara အေဆုံးဖြတ်ချက်: အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ချို့ယွင်းအိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်။ dev Psychol (2012) 48: 1180-710.1037 / a0026342 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
114 ။ MacPherson L ကို, Magidson JF, Reynolds က ek, Kahler CW, Lejuez CW ။ အာရုံခံစားမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများရှာကြံနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ propensity အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားအရက်သေစာအသုံးပြုမှုအတွက်တိုးမြှင့်ခန့်မှန်း။ အရက် Clin Exp Res (2010) 34: 1400-810.1111 / j.1530-0277.2010.01223.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
115 ။ ဗန် Leijenhorst L ကို, Gunther Moore B က, ကအေဲနျဂြီက de Mack ZA, Rombouts လုပ် SA, Westenberg pm တွင်, Crone EA ၏။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဆုလာဘ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဒေသ neurocognitive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Neuroimage (2010) 51: 345-5510.1016 / j.neuroimage.2010.02.038 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
116 ။ Engelmann JB, Moore က S နဲ့, မော်နီကာ Capra ကို C, Bern GS ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကို၏ neurobiological သက်ရောက်မှု Differential ။ 2012-7 / စကင် / nss557 [: Soc Cogn neuroscience (6710.1093) 050 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
117 ။ Buckert M က, Schwieren ကို C, Kudielka BM, Fiebach CJ ။ acute စိတ်ဖိစီးမှုအန္တရာယ်မရေရာဒွိဟခြင်းကိုမနှစ်သက်တာမဟုတ်သက်ရောက်သည်။ တပ်ဦး neuroscience (2014) 8: 82.10.3389 / fnins.2014.00082 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
118 ။ ဗန်တွင်း Bos R ကို, Taris R ကို, Scheppink B က, က de Haan L ကို, Verster JC ။ တစ်ဦးအကဲဖြတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းတံထွေး cortisol နှင့် alpha-amylase အဆင့်ဆင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်သားသစ်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအစီအမံနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားပတျသကျ။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience (2013) 7: 219.10.3389 / fnbeh.2013.00219 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
119 ။ Abercrombie ED, Jacobs BL ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြောင်၏ locus coeruleus အတွက် noradrenergic အာရုံခံ၏ single-ယူနစ်တုံ့ပြန်မှု။ ဗြဲ acute စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် nonstressful လှုံ့ဆော်မှုပေးအပ်သည်။ J ကို neuroscience (1987) 7: 2837-43 [PubMed]
120 ။ နယ်လ်ဆင် EC, Heath AC အ, Lynskey MT, Bucholz KK, က Madden PA ဆိုပြီး, Statham DJ သမား, et al ။ licit နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး-related ရလဒ်များအဘို့ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အန္တရာယ်များ: တစ်အမွှာလေ့လာမှု။ Psychol Med (2006) 36: 1473-8310.1017 / S0033291706008397 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
121 ။ Pederson ll, Koval JJ, McGrady GA, Tyas SL ။ တန်း 8 အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုနှင့်ဆေးလိပ်သောက် status ကိုအကြားဆက်ဆံရေးအဆိုပါဒီဂရီများနှင့်အမျိုးအစား: တစ်ထိုး-တုံ့ပြန်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါသလော prev Med (1998) 27: 337-4710.1006 / pmed.1998.0305 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
122 ။ ဟေးလ်ကီလိုဂရမ်, Hawkins က JD, Catalano RF, အာဘော့ RD, Guo ဂျေမိသားစုနေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်စတင်များ၏အန္တရာယ်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုး။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး (2005) 37: 202-1010.1016 / j.jadohealth.2004.08.014 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
123 ။ Conrad က M, Wardle M ကဘုရင်တစ်ဦးက, Self-အစီရင်ခံနှင့်စူးရှစိတ်ဖိစီးမှုက de ကျေးအိပ်ချ်ဆက်ဆံရေးထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးလိပ်သောက်အတွက်ဆေးလိပ်ရန်။ J ကို Clin Psychol (2013) 69: 710-710.1002 / jclp.21941 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
124 ။ Oaten M က, Cheng K. ပညာရေးဆိုင်ရာစာမေးပွဲစိတ်ဖိစီးမှု Self-ထိန်းချုပ်မှုချို့ယွင်း။ J ကို Soc Clin Psychol (2005) 24: 254-7910.1521 / jscp.24.2.254.62276 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
125 ။ Söderpalm Gordh AH, Brkic S ကိုတစ်ဦးစမ်းသပ်ဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်အရက်အမျိုးအစား 1 မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူလူသားများတွင်အရက်၏Söderpalmခစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စားသုံးမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2011) 99: 696-70310.1016 / j.pbb.2011.05.028 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
126 ။ Byrne DG, Mazanov ဂျေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အနာဂတ်ဆေးလိပ်သောက်အပြုအမူ: တစ်အလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ J ကို Psychosom Res (2003) 54: 313-2110.1016 / S0022-3999 (02) 00411-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
127 ။ Carvajal SC, Wiatrek DE, အီဗန် RI က, ဒူး CR, Nash စင်ကာပူဒေါ်လာ။ ဆေးလိပ်သောက်စတင်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးအဖွတျ: multiethnic အလယ်တန်းကျောင်းနမူနာအတွက် Cross-Section နှင့်အလားအလာတွေ့ရှိချက်။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး (2000) 27: 255-6510.1016 / S1054-139X (00) 00124-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
128 ။ McKenzie M က, Olsson, CA, Jorm AF, Romaniuk H ကို, Patton GC ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက်နေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးလက္ခဏာတွေအစည်းအရုံး: တစ် 10 နှစ် longitudinal လေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်။ စွဲလမ်း (2010) 105: 1652-910.1111 / j.1360-0443.2010.03002.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
129 ။ Covington သူ, III ကို, Miczek Ka ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲလူမှုရေး-ရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု, ကိုကင်းသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်။ အမူအကျင့်ထိခိုက်စေသွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး "Bing" ပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) (2001) 158: 388-9810.1007 / s00213-001-0925-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
130 ။ Haney M က, Maccari S က, က Le Moal က M ရှိမုန် H ကို, Piazza PV ။ လူမှုစိတ်ဖိစီးမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res (1995) 698: 46-5210.1016 / 0006-8993 (95) 00788-R ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
131 ။ Kabbaj M က, က Norton CS, Kollack-Walker က S နဲ့, Watson ဟာ SJ, ရော်ဘင်ဆင် TE, Akil အိပ်ချ်လူမှုရှုံးနိမ့်ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူပွောငျးလဲ: ကင်း-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) (2001) 158: 382-710.1007 / s002130100918 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
132 ။ Tidey JW, Miczek Ka ။ လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု: accumbens dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) (1997) 130: 203-1210.1007 / s002130050230 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
133 ။ Piazza PV, Deminiere JM, le Moal က M ရှိမုန်အိပ်ချ် Stress- နှင့် pharmacologically-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူမှအားနည်းချက်တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res (1990) 514: 22-610.1016 / 0006-8993 (90) 90431-တစ်ဦးက [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
134 ။ ရမ်းဆေးအဲန်အက်ဖ်, ဗန် Ree JM ။ စိတ်ခံစားမှုသော်လည်းမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမူးယစ်ဆေး-နုံကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res (1993) 608: 216-2210.1016 / 0006-8993 (93) 91461-Z ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
135 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ (2008) 363: 3137-4610.1098 / rstb.2008.0093 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
136 ။ Boileau ငါ Dagher တစ်ဦးက, Leyton M က, ဂွန် RN, Baker GB ကို, Diksic M က, et al ။ လူသားများတွင်စိတ်ကြွဆေးမှ modeling ာင်း: ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦး [11C] raclopride / positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2006) 63: 1386-9510.1001 / archpsyc.63.12.1386 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
137 ။ Moeller အပြည်ပြည်သွား, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz JM, Swann AC အ။ Impulse ၏စိတ်ရောဂါရှုထောင့်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2001) 158: 1783-9310.1176 / appi.ajp.158.11.1783 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
138 ။ Hamidovic တစ်ဦးကကလေး, E, Conrad M ကဘုရင်တစ်ဦးက, ခံစားချက်နဲ့ Cortisol လွှတ်ပေးရန်အတွက်က de ကျေးအိပ်ချ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုစိတ်ကြွဆေး၏ခံစားချက်သက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ 2010-109 / j.drugalcdep.175 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (8010.1016) 2009.12.029 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
139 ။ Brielmaier J ကို, မက်ဒေါ်နယ် CG, Smith က RF ။ corticotropin-releasing အချက် 1 receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဝယ်ယူအပေါ်စူးရှသောကဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) (2012) 219: 73-8210.1007 / s00213-011-2378-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
140 ။ Kuzmin တစ်ဦးက, Semenova S က, Zvartau EE, ဗန် Ree JM ။ စူးရှသောစိတ်ခံစားမှုစိတ်ဖိစီးမှုများကကြွက်၏မူးယစ်ဆေးနုံ, inbred မျိုးကွဲအတွက်မော်ဖင်းအကိုက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်မြှင့်။ EUR Neuropsychopharmacol (1996) 6: 63-810.1016 / 0924-977X (95) 00066X [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
141 ။ Goeders NE ။ စွဲလမ်းအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို။ EUR Neuropsychopharmacol (2003) 13: 435-4110.1016 / S0924-977X (03) 90003-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
142 ။ Zinser MC, Baker တီဘီ, Sherman je, Cannon DS ။ Self-သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အကြားဆက်ဆံရေးဆေးလိပ်သောက်ဆက်လက်နှင့်ဆုတ်ခွာအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရမ္မက်နှင့်မတရားသော။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol (1992) 101: 617-2910.1037 / 0021-843X.101.4.617 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
143 ။ Colman ငါ Garad Y ကို, Zeng Y ကို, Naicker K သည်, သီတင်းပါတ်က M, Patten SB, et al ။ လူကြီးအတွက်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အလွန်အကျွံသောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သက်ရောက်မှုကိုစိစစ်။ Soc စိတ်ရောဂါကုသမှု Psychiatric Epidemiol (2013) 48: 265-7410.1007 / s00127-012-0531-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
144 ။ ဧနောက်, MA ။ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုများအတွက်ခန့်မှန်းအဖြစ်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 214: 17-3110.1007 / s00213-010-1916-6 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
145 ။ White က HR, Widom CS ။ မိန်းမတကာတို့ထက်လူကြီးပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်ကလေးသည်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လျစ်လျူရှု၏သက်ရောက်မှုသုံးခုအလားအလာပြုပြီ။ J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး (2008) 69: 337-47 [PubMed]
146 ။ Young-Wolff KC, Kendler KS, Prescott CA. ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်လူကြီးအတွက်အရက်သုံးစွဲမှုအပေါ်မကြာသေးမီစိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များ၏ interactive ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး (2012) 73: 559-69 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
147 ။ Albertsen K ကို Borg V ကို, ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာပေါ်တွင်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုများ Oldenburg ခတစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု, relapse နှင့်ငွေပမာဏကိုသောက်သည်။ prev Med (2006) 43: 291-30510.1016 / j.ypmed.2006.05.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
148 ။ အလက်ဇန်းဒါး ll, Beck K. စစ်ရေးသူနာပြု၏ဆေးလိပ်သောက်အပြုအမူ: အလုပ်စိတ်ဖိစီးမှု, အလုပ်ကျေနပ်မှုနှင့်လူမှုရေးထောက်ပံ့မှုကိုမှဆက်ဆံရေး။ J ကို Adv သူနာပြု (1990) 15: 843-910.1111 / j.1365-2648.1990.tb01916.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
149 ။ Westman M က, ဧဒင်ဥယျာဉ်: D, Shirom အေယောဘသည်စိတ်ဖိစီးမှု, စီးကရက်ဆေးလိပ်နှင့်ရပ်နားခြင်း: သက်တူရွယ်တူထောက်ခံမှုများအေးစက်ဆိုးကျိုးများ။ Soc သိပ္ပံ Med (1985) 20: 637-4410.1016 / 0277-9536 (85) 90402-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
150 ။ Kageyama T က, Kobayashi T က, Nishikido N ကို, အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာတွေကို Oga J ကို, Kawashima အမ်အသင်းနှင့်ဂျပန်ဆေးရုံများအတွက်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းသူနာပြုများအကြားဆေးလိပ်သောက်အပြုအမူတွေနဲ့အတူမကြာသေးခင်ဘဝဖြစ်ရပ်များ။ Ind ကနျြးမာရေး (2005) 43: 133-4110.2486 / indhealth.43.133 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
151 ။ နှင်းဆီ je, အရှင်အာနန္ဒာကို S, Jarvik ME ။ စိုးရိမ်စိတ်စားစရာနှင့် monotonous တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းဆေးလိပ်စီးကရက်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (1983) 8: 353-910.1016 / 0306-4603 (83) 90035-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
152 ။ Pomerleau CS, OF Pomerleau ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုအပေါ်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများ၏သက်ရောက်မှုများ။ Psychophysiology (1987) 24: 278-8510.1111 / j.1469-8986.1987.tb00295.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
153 ။ McKee လုပ် SA, Sinha R ကို, Weinberger AH, Sofuoglu M က, Harrison EL, Lavery M က, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုဆေးလိပ်သောက်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆုလာဘ် potentiates ။ J ကို Psychopharmacol (2011) 25: 490-50210.1177 / 0269881110376694 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
154 ။ ကလေးကစီးကရက်တဏှာနှင့်ဆေးလိပ်သောက်အပေါ်စူးရှသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု၏အီးက de ကျေးအိပ်ချ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နီကိုတင်းတောဘ Res (2010) 12: 449-5310.1093 / ntr / ntp214 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
155 ။ Magid V ကို, အေး CR, Stroud LR, Nichter M က, Nichter M က, Negative TERN အဖွဲ့ဝင်များကိုထိခိုက်, စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများတွင်ဆေးလိပ်သောက်: အရက်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုလွတ်လပ်သောထူးခြားတဲ့အသင်းအဖွဲ့များ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2009) 34: 973-510.1016 / j.addbeh.2009.05.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
156 ။ Winstanley EL, Steinwachs DM, Ensminger ME, Latkin, CA, Stitzer ML, Olsen Y. ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, မှီခိုနှင့်ကုသမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ Self-အစီရင်ခံရပ်ကွက်အတွင်းစနစ်တကျနှင့်လူမှုရေးမြို့တော်၏အသင်းအဖွဲ့။ 2008-92 / j.drugalcdep.173 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (8210.1016) 2007.07.012 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
157 ။ Blomeyer: D, Treutlein J ကို, Esser, G, Schmidt က MH, Schumann, G, CRHR1 ဗီဇနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များအကြား Laucht အမ် Interaction ဆယ်ကျော်သက်မိုးသည်းထန်စွာအရက်သေစာအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2008) 63: 146-5110.1016 / j.biopsych.2007.04.026 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
158 ။ Harling M က, Strehmel P ကို, Schablon တစ်ဦးက, Nienhaus အေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု, demoralization နှင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာများကဆေးရွက်ကြီး, အရက်နှင့်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စားသုံးမှု။ J ကိုအလုပ်အကိုင် Med Toxicol (2009) 4: 4.10.1186 / 1745-6673-4-4 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
159 ။ Dawson DA, Grant က BF, Li က TK ။ စိတ်ဖိစီးမှု-reactive အရက်သောက်ပေါ်တွင်ပထမဆုံးသောက်မှာအသက်သက်ရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res (2007) 31: 69-7710.1111 / j.1530-0277.2006.00265.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
160 ။ Jacobson IG, ရိုင်ယန်, MA, Hooper TI, Smith က TC, Amoroso PJ, Boyko EJ, et al ။ စစ်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးဖြန့်ကျက်မီနှင့်အပြီးအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အရက်-related ပြဿနာများကို။ ဂျေအေအမ်အေ (2008) 300: 663-7510.1001 / jama.300.6.663 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
161 ။ Wilkes je, Bliese PD ကင်မ် py, သောမတ်စ် JL, McGurk: D, Hoge CW ။ အီရတ်စစ်ပွဲမှပြန်လာသောအမေရိကန်စစ်သားအကြားအရက်သေစာအလွဲသုံးစားလုပ်ဖို့တိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံ relationship ။ 2010-108 / j.drugalcdep.115 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (2110.1016) 2009.12.003 ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
162 ။ Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Chu K ကို Dayas CV ကို, Funk: D, Knapp DJ သမား, Koob gf, et al ။ ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းစဉ်အတွင်းတဏှာ၏စိတ်ဖိစီးမှုတိုးမြှင်: relapse များအတွက်အန္တရာယ်။ အရက် Clin Exp Res (2005) 29: 185-9510.1097 / 01.ALC.0000153544.83656.3C [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
163 ။ ဗန် der Pol P ကို, Liebregts N က, က de Graaf R ကို, Korf DJ သမား, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က, ဗန် Laar အမ်ဆေးခြောက်မှီခိုဖို့မကြာခဏဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကနေအကူးအပြောင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း: တစ်သုံးနှစ်အလားအလာလေ့လာမှု။ 2013-133 / j.drugalcdep.352 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (910.1016) 2013.06.009 ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
164 ။ Chen က CY, O 'Brien က MS, အန်သိုနီ JC ။ အဘယ်သူသည်မကြာမီအသုံးပြုမှုစတင်ခြင်းပြီးနောက်ဆေးခြောက်မှီခိုဖြစ်လာ? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် epidemiological သက်သေအထောက်အထား: 2000-2001 ။ 2005-79 / j.drugalcdep.11 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (2210.1016) 2004.11.014 ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
165 ။ ဆွစ်ဖ် W က, Coffey ကို C, Carlin JB, Degenhardt L ကို, Patton GC ။ 24 နှစ်ပေါင်းမှာဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများက: ငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက်ပုံမှန်အပတ်စဉ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်မှီခိုဖို့ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။ စွဲလမ်း (2008) 103: 1361-7010.1111 / j.1360-0443.2008.02246.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
166 ။ Coffey ကို C, Carlin JB, Lynskey M ကလီ N ကို, Patton GC ။ ဆေးခြောက်မှီခို၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုရှေ့: ဗစ်တိုးရီးယားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကနျြးမာရေးအလိုက်လေ့လာရာမှတွေ့ရှိချက်များ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2003) 182: 330-610.1192 / bjp.02.320 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
167 ။ Al'Absi M က, Amunrud T က, Wittmers LE ။ နီကိုတင်း abstinence နှင့်လေ့ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်အမူအကျင့်စိန်ခေါ်မှုများ၏ Psychophysiological ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2002) 72: 707-1610.1016 / S0091-3057 (02) 00739-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
168 ။ Al'Absi M က, Nakajima က M, Grabowski ဂျေစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု dysregulation နှင့်နီကိုတင်းမှီခိုယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် analgesia ။ Biol Psychol (2013) 93: 1-810.1016 / j.biopsycho.2012.12.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
169 ။ ဘက်ချမန်း AF, Laucht M က, Schmid B, Wiedemann K ကိုမန်း K ကို Zimmermann အမေရိကန်။ တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုစမ်းသပ်မှုနဲ့ Cortisol စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမှမဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်ဆေးလိပ်သောက်အတွက်မှီခိုရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်သောပြီးနောက်စီးကရက်တဏှာတိုး။ J ကို Psychopharmacol (2010) 24: 247-5510.1177 / 0269881108095716 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
170 ။ Chaplin TM, ဟောင်ကောင် K ကို Fox က HC, Siedlarz KM, Bergquist K ကို Sinha R. အပြုအမူ arousal အရက်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue တုံ့ပြန်နှင့်ကိုကင်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစွဲ။ Hum Psychopharmacol (2010) 25: 368-7610.1002 / hup.1127 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
171 ။ Colamussi L ကို, Bovbjerg DH, Erblich ဂျေ Stress- နှင့် cue-သွေးဆောင်စီးကရက်တဏှာ: ဆေးလိပ်သောက်တဲ့မိသားစုသမိုင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ 2007-88 / j.drugalcdep.251 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (810.1016) 2006.11.006 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
172 ။ Erblich J ကို, Bovbjerg DH, Diaz GA ။ cue- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စီးကရက်တဏှာ၏မျိုးဗီဇခန့်မှန်း: တစ်ခုရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်လေ့လာမှု။ Exp Clin Psychopharmacol (2012) 20: 40-610.1037 / a0025369 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
173 ။ et al Kotlyar M က, မောင်းသူမဲ့လေ: D, သူရ: P, Hatsukami DK, Brauer L ကို, Adson DE ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် bupropion တဏှာပေါ်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ခံစားချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နီကိုတင်းတောဘ Res (2011) 13: 492-710.1093 / ntr / ntr011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
174 ။ Perkins Ka, Grobe je ။ စူးရှသောကဖိစီးမှုကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဆန္ဒတိုးတက်လာခဲ့သည်။ br J ကိုစွဲလမ်း (1992) 87: 1037-4010.1111 / j.1360-0443.1992.tb03121.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
175 ။ Saladin ME, Grey က KM, လက်သမား MJ, LaRowe SD, DeSantis သည် SM, Upadhyaya HP က။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေ / စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုမှတပ်မက်ခြင်းနှင့် cue reactivity ကိုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း (2012) 21: 210-2010.1111 / j.1521-0391.2012.00232.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
176 ။ Wardle MC, Munafò MR, က de ကျေးအိပ်ချ်စူးရှသောနီကိုတင်း abstinence စဉ်အတွင်းလူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 218: 39-4810.1007 / s00213-010-2150-y က [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
177 ။ Tartter MA, Ray LA က။ မိုးသည်းထန်စွာသောက်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အရက်တဏှာ၏အလားအလာလေ့လာမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ (2012) 101: 625-3110.1016 / j.pbb.2012.03.007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
178 ။ McRae-Clark က AL, Baker NL မာရီယာဟာ MM, Brady KT ။ တစ်ဦးရှေ့ပြေးလေ့လာမှု: ဆေးခြောက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တဏှာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ် oxytocin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) (2013) 228: 623-3110.1007 / s00213-013-3062-4 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
179 ။ Harris က DS, Reus VI ကို, Wolkowitz OM, Mendelson je, ဂျုံးစ် RT ကို။ လှုံ့ဆော်-မှီခိုလူနာစမ်းသပ်ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2005) 29: 669-7710.1016 / j.pnpbp.2005.04.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
180 ။ Li က CS, Kosten TR, abstinent ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုပုံရိပ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation အတွက် Sinha R. လိင်ကွဲပြားမှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2005) 57: 487-9410.1016 / j.biopsych.2004.11.048 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
181 ။ Sinha R ကို, ဖျူး T က, Aubin LR, O'Malley အက်စ်အက်စ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုနှင့်ကင်းတပ်မက်။ Psychopharmacology (Berl) (2000) 152: 140-810.1007 / s002130000499 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
182 ။ Sinha R ကို, Talih M က, Malison R ကို, Cooney N ကို, Anderson က GM က, Kreek MJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာပြည်နယ်များစဉ်အတွင်း Hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့် sympatho-Adreno-medullary တုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) (2003) 170: 62-7210.1007 / s00213-003-1525-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
183 ။ Waldrop AE, စျေး KL, Desantis သည် SM, Simpson AN, Back ကို SE, McRae AL, et al ။ ရပ်ရွာ-နေသောကင်း-မှီခိုယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုကင်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လူမှုရေးဖိအားကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်ကြသည်။ Psychoneuroendocrinology (2010) 35: 798-80610.1016 / j.psyneuen.2009.11.005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
184 ။ Constantine N ကို, မော်ဂန် CJ, Battistella S က, O'Ryan: D, Davis က: P, Curran HV ။ လက်ရှိနှင့်ယခင် opiate စွဲအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စူးရှသောကဖိစီးမှု။ 2010-109 / j.drugalcdep.220 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (510.1016) 2010.01.012 ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
185 ။ Grüsserသည် SM, Morsen က CP, Wolfling K သည်, Flor အိပ်ချ်ဖိစီး, ဖြေရှင်း, အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်တဏှာ၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ EUR စွဲ Res (2007) 13: 31-810.1159 / 000095813 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
186 ။ Sinha R ကို, Fox က H ကို, ဟောင်ကောင် KI, Sofuoglu M က, မော်ဂန် PT, Bergquist KT ။ လိင် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကင်း-မှီခိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်မူးယစ်ဆေးတဏှာ: relapse လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ Exp Clin Psychopharmacol (2007) 15: 445-5210.1037 / 1064-1297.15.5.445 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
187 ။ Fox က HC, Garcia က M ကို, Jr က Kemp K ကို Milivojevic V ကို, Kreek MJ, Sinha R. ကင်းမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှနှလုံးသွေးကြောနှင့် corticoadrenal တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology (Berl) (2006) 185: 348-5710.1007 / s00213-005-0303-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
188 ။ Degenhardt L ကို, Coffey ကို C, Carlin JB, ဆွစ်ဖ် W က, Moore ကအီး, Patton GC ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ရံဖန်ရံခါဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်များ: ဗစ်တိုးရီးယားသြစတြေးလျအတွက် 10 နှစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2010) 196: 290-510.1192 / bjp.bp.108.056952 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
189 ။ စတောစျ CL ။ လူငယ်အတွက်ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုဖို့လျင်မြန်စွာအသွင်ကူးပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ နီကိုတင်းတောဘ Res (2008) 10: 1099-10410.1080 / 14622200802087556 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
190 ။ Galaif ER, Nyamathi လေး, Stein ဂျေအေ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ခန့်မှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများ, နှင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးမှီခို။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (1999) 24: 801-1410.1016 / S0306-4603 (99) 00038-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
191 ။ Fidler ဂျာအနောက် R. ကိုယ်ပိုင်ရိပ်မိဆေးလိပ်သောက်စိတ်ရင်းနှင့်အထွေထွေလူဦးရေနမူနာမှာသူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှု။ နီကိုတင်းတောဘ Res (2009) 11: 1182-810.1093 / ntr / ntp120 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
192 ။ McEwen တစ်ဦးကအနောက် R ကို, McRobbie အိပ်ချ်ဆေးလိပ်သောက်ဘို့လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ဆေးလိပ်သောက်ကုသမှုန်ဆောင်မှုများတက်ရောက်ခြင်း client များအတွက်သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှု။ နီကိုတင်းတောဘ Res (2008) 10: 843-5010.1080 / 14622200802027248 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
193 ။ Stein ဂျာ Newcomb MD, Bentler pm တွင်။ Initiative နှင့်ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: ပြောင်းလဲနေတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ J ကို Apple က Soc Psychol (1996) 26: 160-8710.1111 / j.1559-1816.1996.tb01844.x [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
194 ။ Comeau N ကို, Stewart က SH, Loba P. အရက်, ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအဘို့အမြီးကောင်ပေါက် '' တွန်းအားမှရှာကြံရိုစိုးရိမ်စိတ်, စိုးရိမ်ပူပန် sensitivity ကိုနှင့်အာရုံ၏ဆက်ဆံရေး။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2001) 26: 803-2510.1016 / S0306-4603 (01) 00238-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
195 ။ Beseler CL, Aharonovich အီး, Keyes KM, Hasin DS ။ အရက်မှီခိုဖို့မှာ-အန္တရာယ်အရက်သောက်ရာမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူအကူးအပြောင်း: မိသားစုသမိုင်းကြောင်းဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်သောက်သုံးစိတ်ရင်း။ အရက် Clin Exp Res (2008) 32: 607-1610.1111 / j.1530-0277.2008.00619.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
196 ။ Bujarski SJ, Norberg MM, Copeland ဂျေဒုက္ခဆင်းရဲသည်းခံစိတ်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း-related ပြဿနာများအကြားအသင်းအဖွဲ့: စိတ်ရင်းနဲ့ကျား, မဖြေရှင်း၏ဖြန်ဖြေခြင်းနှင့်စိစစ်အခန်းကဏ္ဍ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2012) 37: 1181-410.1016 / j.addbeh.2012.05.014 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
197. Parrott AC, Garnham NJ, Wesnes K, Pincock C. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ရှောင်ခြင်း။ ၂၄ နာရီအတွင်းသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စိတ်အခြေအနေအခြေအနေအပေါ်နှိုင်းယှဉ်သက်ရောက်မှုများ။ Hum Psychopharmacol (24) 1996: 11-391 / (SICI) 40010.1002-1099 (1077) 199609: 11 <5 :: AID-HUP391> 780.CO; 3.0-Z [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
198 ။ Parrott AC အ, ကေးက FJ ။ နေ့စဉ်ထင်ရှားသော, ကူညီပြီး, ဖိစီးမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှု: စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ရှောင်နှင့် Non-ဆေးလိပ်သောက်။ ပြုမူနေ Pharmacol (1999) 10: 639-4610.1097 / 00008877-199911000-00010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
199 ။ Al'Absi M က, Carr က SB, Bongard အက်စ်ဒေါသနှင့်ဆေးလိပ် abstinence စဉ်အတွင်းနှင့်စူးရှစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် psychobiological အပြောင်းအလဲများကို: ဆေးလိပ်သောက် relapse ၏ခန့်မှန်းချက်။ int J ကို Psychophysiol (2007) 66: 109-1510.1016 / j.ijpsycho.2007.03.016 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
200 ။ Compton WM, သောမတ်စ် YF, Stinson FS, Grant က BF ။ အရက်နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားရေး epidemiological စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို: ပျံ့နှံ့, မသန်စွမ်းများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ DSM-IV မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုများ၏ comorbidity ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2007) 64: 566-7610.1001 / archpsyc.64.5.566 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
201 ။ Hasin DS, Stinson FS, Ogburn အီး, Grant က BF ။ အရက်နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားရေး epidemiological စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို: ပျံ့နှံ့, မသန်စွမ်းများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ DSM-IV အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုများ၏ comorbidity ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2007) 64: 830-4210.1001 / archpsyc.64.7.830 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
202 ။ လိုပက်ဇ်-Quintero ကို C, et al Perez de los Cobos J ကို, Hasin DS, Okuda M က, ဝမ်က S, Grant က BF ။ ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲခြင်းကနေနီကိုတင်း, အရက်, ဆေးခြောက်နှင့်ကိုကင်းအပေါ်မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း၏ခန့်မှန်း: အရက်အပေါ်အမျိုးသားရေး epidemiological စစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုနှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများ (NESARC) ။ 2011-115 / j.drugalcdep.120 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (3010.1016) 2010.11.004 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
203 ။ Volkert J ကို, Schulz H ကို, Härter M က, Wlodarczyk အို Andreas အက်စ်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုအတွက်စိတ်ရောဂါ၏ပျံ့နှံ့မှု - တစ် Meta-analysis သည်။ အိုမင်း Res ဗြာ (2013) 12: 339-5310.1016 / j.arr.2012.09.004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
204 ။ Caplan RD, Cobb က S, ပြင်သစ် JR ။ , အလုပ်ဖိစီးမှု, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုရေးအထောက်အပံ့ဖြင့်ဆေးလိပ်၏ချုပ်ရာ၏ Jr ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး။ J ကို Apple က Psychol (1975) 60: 211-910.1037 / h0076471 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
205 ။ Kouvonen တစ်ဦးက, Kivimäki M က, Virtanen က M, Pentti J ကို, Vahtera ဂျေလုပ်ငန်းခွင်စိတ်ဖိစီးမှု, ဆေးလိပ်သောက်အခြေအနေ, နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ပြင်းထန်မှု: 46,190 န်ထမ်းတစ်ဦးစူးစမ်းလေ့လာမှု။ J ကို Epidemiol အဝန်းကနျြးမာရေး (2005) 59: 63-910.1136 / jech.2004.019752 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
206 ။ McKee လုပ် SA, Maciejewski PK, Falba T က, Mazure CM ။ ဆေးလိပ်သောက် status ကိုပြောင်းလဲမှုများအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များ၏ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ စွဲလမ်း (2003) 98: 847-5510.1046 / j.1360-0443.2003.00408.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
207 ။ တူ T က, အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှု Vaglum P. အစပိုင်းမှာဆက်လက်သို့မဟုတ်ပြတ်တောက်။ br J ကိုစွဲလမ်း (1990) 85: 899-90910.1111 / j.1360-0443.1990.tb03720.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
208 ။ Steensma ကို C, Boivin JF, Blais L ကို, ရွိုင်းအီးချုပ်ရာလမ်း-based လူငယ်များအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထိုးသွင်း၏။ J ကိုမြို့ပြကျန်းမာရေး (2005) 82: 622-3710.1093 / jurban / jti121 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
209 ။ အီဗန် JL, Hahn ဂျာ Lum PJ, Stein ES, San Francisco မှာငယ်ရွယ်ဆေးထိုးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏အလားအလာဆောင်များတွင်အတွက်ဆေးထိုးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရပ်နားခြင်းနှင့် relapse စာမျက်နှာ K. ခန့်မှန်း,, CA (ပန်းကန်ပြားပျံလေ့လာမှု) ။ 2009-101 / j.drugalcdep.152 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (710.1016) 2008.12.007 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
210 ။ နောက်ကျော et al SE, Hartwell K ကို DeSantis သည် SM, Saladin က M, McRae-Clark က AL, စျေး KL ။ ဓာတ်ခွဲခန်းစိတ်ဖိစီးမှုဒေါသမှ reactivity ကိုကင်းဖို့ relapse ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ 2010-106 / j.drugalcdep.21 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (710.1016) 2009.07.016 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
211 ။ ဘရောင်း RA, Lejuez CW, ခိုင်ခံ့ DR, Kahler CW, et al Zvolensky MJ, လက်သမား ll ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Self-quitters အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲသည်းခံစိတ်နဲ့အစောပိုင်းဆေးလိပ်သောက်ချုံး၏အလားအလာစာမေးပွဲ။ နီကိုတင်းတောဘ Res (2009) 11: 493-50210.1093 / ntr / ntp041 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
212 ။ သမီးတို့ SB, Lejuez CW, Kahler CW, ခိုင်ခံ့ DR, Brown က RA ။ လူနေအိမ်ကုသမှု-ရှာကြံပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံးအကြားလတ်တလော abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲသည်းခံစိတ်နဲ့ကြာချိန်။ Psychol စွဲပြုမူနေ (2005) 19: 208-1110.1037 / 0893-164X.19.2.208 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
213 ။ Farley M ကရွှေ JM, လူငယ်, G, Mulligan M က, Minkoff JR ။ စိတ်ဒဏ်ရာသမိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုရှာကြံလူနာအကြား relapse ဖြစ်နိုင်ခြေ။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော (2004) 27: 161-710.1016 / j.jsat.2004.06.006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
214 ။ Moran တစ်ဦးက, Maguire N ကို, Howell အက်ဖ် Smoking နှင့်အိုင်းရစ်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအကြားဖြတ်။ ir Med J ကို (2000) 93: 272-3 [PubMed]
215 ။ Ramos DE, Brown က SA ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု relapse အခြေအနေများ၏အတန်း: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ Psychol စွဲပြုမူနေ (2008) 22: 372-910.1037 / 0893-164X.22.3.372 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
216 ။ Zhu SH Sun, J ကိုဘီလ် SC, Choi WS, ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာ၏ Malarcher အေခန့်မှန်းအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်ပါ။ နံနက် J ကို Prev Med (1999) 16: 202-710.1016 / S0749-3797 (98) 00157-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
217 ။ Hyman သည် SM, Paliwal P ကို, Chaplin TM, Mazure CM, Rounsaville BJ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာများ၏ Sinha R. ပြင်းထန်မှုကိုကင်း relapse အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရလဒ်များသော်လည်းမယောက်ျား၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ 2008-92 / j.drugalcdep.208 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (1610.1016) 2007.08.006 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
218 ။ အိတ် JY, McKendrick K ကိုဘဏ်များအက်စ်မိန်းမတို့အဘို့လူနေအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုရလဒ်များအပေါ်အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏သက်ရောက်မှု။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော (2008) 34: 90-10010.1016 / j.jsat.2007.01.010 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
219 ။ Young ကလေး, ဘှိုငျဒျ C. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အက်ကွဲကင်းဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူအာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသမီးနမူနာများတွင်ကုသမှုအောင်မြင်မှု။ Subst ချိုးဖောက်မှုများ (2000) 21: 9-1910.1080 / 08897070009511414 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
220 ။ Greenfield SF, Kolodziej ME, Sugarman DE, Muenz LR, Vagge LM, သူ Dy, et al ။ တစ်ဦးအလားအလာလေ့လာမှု: အတွင်းလူနာအရက်ကုသမှုအောက်ပါအလွဲသုံးစားမှုနှင့်သောက်သုံးရေရလဒ်များ၏သမိုင်း။ 2002-67 / S227-3410.1016 (0376) 8716-02 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (00072) 8 ပြုမှPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
221 ။ Fiorentine R ကို, Pilati ML, Hillhouse အမတ်။ မူးယစ်ဆေးကုသမှုရလဒ်များ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသမိုင်း၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအားစုံစမ်းစစ်ဆေး။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး (1999) 31: 363-7210.1080 / 02791072.1999.10471766 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
222 ။ Gutierres SE, Todd အမ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုသူကုသမှုရလဒ်များအပေါ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှု၏သက်ရောက်မှု။ ပါမောက္ခ Psychol Res PR (1997) 28: 348-5410.1037 / 0735-7028.28.4.348 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
223 ။ Slopen N ကို, Kontos EZ, Ryff CD ကို, Ayanian JZ, အဲလ်ဘတ်, MA, Williams က DR ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်ဇွဲ, ရပ်နားခြင်းနှင့် 9-10 နှစ်အတွင်း relapse: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးအလားအလာလေ့လာမှု။ 2013-24 / s1849-6310.1007-10552-013 [: ကင်ဆာထိန်းချုပ်ရေး (0262)5စေတယ်PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
224 ။ လင်းမဂ္ဂါဝပ်, အလွန်လေးလံသောဆေးလိပ်သောက်သူများအကြားဆေးလိပ်သောက်ဘို့ Stein အက်စ်အကြောင်းရင်း။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (1985) 10: 197-20110.1016 / 0306-4603 (85) 90028-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
225 ။ ဘရောင်း RA, Lejuez CW, Kahler CW, ခိုင်ခံ့ DR ။ အတိတ်ဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းကြိုးစားမှု၏ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်းခံစိတ်နဲ့ကြာချိန်။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol (2002) 111: 180-510.1037 / 0021-843X.111.1.180 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
226 ။ Krenek M က, Maisto လုပ် SA ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်ကုသမှုရလဒ်များ: တစ်ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ Clin Psychol ဗြာ (2013) 33: 470-8310.1016 / j.cpr.2013.01.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
227 ။ ဘရောင်းလုပ် SA, Vik PW, ပက် TL, Grant ကငါ Schuckit MA ။ စိတ်ဖိစီးမှု, အားနည်းချက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရက် relapse ။ J ကိုလုံးအရက် (1995) 56: 538-45 [PubMed]
228 ။ Pilowsky DJ သမား, Keyes KM, Geier တီဂျေ, Grant က BF, Hasin DS ။ ယခင်ကအရက်မှီခိုလူကြီးများအကြားစိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့် relapse ။ Soc လုပ်ငန်းခွင် Ment ကနျြးမာရေး (2013) 11: 184-9710.1080 / 15332985.2012.711278 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
229 ။ Flórez-Salamanca L ကို, Secades-ဗီလာ R ကို, Budney AJ, Garcia-Rodriguez အိုဝမ်က S, Blanco C. ဖြစ်တန်ရာကိန်းနှင့် relapse ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်များ၏ခန့်မှန်း: အရက်အပေါ်အမျိုးသားရေး epidemiological စစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုနှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများ (NESARC) ။ 2013-132 / j.drugalcdep.127 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (3310.1016) 2013.01.013 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
230 ။ McMahon RC ။ ကိုကင်း relapse ခန့်မှန်းအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ဖိစီးမှု, လူမှုရေးအထောက်အပံ့ကို။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော (2001) 21: 77-8710.1016 / S0740-5472 (01) 00187-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
231 ။ Marcus MT, Schmitz J ကို, Moeller အပြည်ပြည်သွား, Liehr P ကို, Swank P ကို, Cron စင်ကာပူဒေါ်လာ, et al ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ကုထုံးအသိုင်းအဝိုင်းကုသမှုနေထိုင်၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အရှည်။ [2013-12 / ADT.175b8210.1097e0cfd013b: စှဲလမျးသူသူတို့၏ရယူထားသော (31826)9disordersလက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
232 ။ Easton CJ, Swan က S, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုဝင်ရောက် clients များအတွက်မိသားစုအကြမ်းဖက်မှု Sinha R. ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော (2000) 18: 23-810.1016 / S0740-5472 (99) 00019-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
233 ။ Chong J ကို, အမေရိကန်ကအိန္ဒိယအမျိုးသမီး relapse ၏လိုပက်ဇ်ဃခန့်မှန်းပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုပြီးနောက်။ နံနက်အိန္ဒိယ Alsk ဇာတိ Ment ကျန်းမာရေး Res (2008) 14: 24-4810.5820 / aian.1403.2007.24 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
234 ။ Garrity TF, Prewitt SH, Joosen M က, Tindall က MS, Webster JM, Leukefeld CG ။ baseline ပုဂ္ဂလဒိဋ္စိတ်ဖိစီးမှုမူးယစ်ဆေးတရားရုံး client များအကြား 1 နှစ်ရလဒ်များခန့်မှန်းထားပါတယ်။ int J ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Ther comp Criminol (2008) 52: 346-5710.1177 / 0306624X07305479 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
235 ။ ထာ SH, Sudarshi: D, Srikrishnan AK, Celentano DD, Vasudevan CK, Anand က S, et al ။ ချန်နိုင်း, အိန္ဒိယအတွက်ဆေးထိုးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏လူထုအခြေပြုဆောင်များတွင်အတွက်ဆေးထိုးရပ်နားခြင်း, relapse နှင့်စတင်နှင့်ဆက်စပ်အချက်များ။ စွဲလမ်း (2012) 107: 349-5810.1111 / j.1360-0443.2011.03602.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
236 ။ အန်ဒါဆင်ကီလိုဂရမ်, Ramos DE, Brown က SA ။ ဘဝကစိတ်ဖိစီး, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် comorbid လူငယ်: ပစ္စည်းဥစ္စာ relapse များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-အားနည်းချက်မော်ဒယ်တစ်ဦးစာမေးပွဲ။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး (2006) 38: 255-6210.1080 / 02791072.2006.10399851 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
237 ။ ဒိုဟာဆီ K ကို Kinnunen T က, Militello FS, Garvey AJ ။ abstinence ၏ပထမလအတွင်းမှာဆေးလိပ်သောက်ဖို့တိုက်တွန်း: relapse နှင့်ခန့်မှန်းရန်ကြားဆက်ဆံရေး။ Psychopharmacology (Berl) (1995) 119: 171-810.1007 / BF02246158 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
238 ။ Shiffman S က, ရေ AJ ။ အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ချုံးဆေးလိပ်: တစ်အလားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ 2004-72 / 192-20110.1037X.0022 [: J ကို Clin Psychol (006) 72.2.192 တိုင်ပင်ပါPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
239 ။ seo: D, Lacadie CM, Tuit K ကိုဟောင်ကောင် KI, Constable RT ကို, Sinha R. ventromedial prefrontal function ကို, အရက်တဏှာနှင့်နောက်ဆက်တွဲ relapse အန္တရာယ်နှောင့်အယှက်။ ဂျေအေအမ်အေ (2013) 70: 727-3910.1001 / jamapsychiatry.2013.762 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
240 ။ Fox က HC, Bergquist KL, ဟောင်ကောင် KI, Sinha R. စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်မကြာသေးမီက abstinent အရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရက် cue-သွေးဆောင်တဏှာ။ အရက် Clin Exp Res (2007) 31: 395-40310.1111 / j.1530-0277.2006.00320.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
241 ။ Fox က HC, ဟောင်ကောင် KI, Siedlarz KM, Bergquist K သည်, အန်ဒါဆင်, G, Kreek MJ, et al ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူအရက်-မှီခိုလူနာအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တွေကိုမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် HPA တုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်-တိကျတဲ့ dissociations ။ အရက်အရက် (2009) 44: 575-8510.1093 / alcalc / agp060 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
242 ။ Higley AE, ချီစက် NA, Spadoni အေဒီ, Quello SB, Goodell V ကို, Mason ဆို BJ ။ လူသားတစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းပါရာဒိုင်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုသော induction တုံ့ပြန်တဏှာအရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကုသမှုရလဒ်ကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 218: 121-910.1007 / s00213-011-2355-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
243 ။ Sinha R ကို, Fox က HC, ဟောင်ကောင် Ka, Bergquist K ကို Bhagwagar Z ကို, Siedlarz KM ။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အရက်တဏှာ Enhanced နှင့်အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် cue ထိတွေ့အောက်ပါဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ Neuropsychopharmacology (2009) 34: 1198-20810.1038 / npp.2008.78 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
244 ။ Sinha R ကို, Fox က HC, ဟောင်ကောင် KI, Hansen J ကို, Tuit K ကို Kreek MJ ။ adrenal sensitivity ကို, stress- နှင့် cue-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်နောက်ဆက်တွဲအရက် relapse နှင့်ကုသမှုရလဒ်များအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (2011) 68: 942-5210.1001 / archgenpsychiatry.2011.49 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
245 ။ ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်ဆက်စပ် Fox က HC, Tuit KL, Sinha R. စိတ်ဖိစီးမှုသည့်စနစ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအရက်နှင့်ကင်းဘို့တဏှာကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ Hum Psychopharmacol (2013) 28: 40-5310.1002 / hup.2280 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
246 ။ Fox က HC, Talih M က, Malison R ကို, Anderson က GM က, Kreek MJ မကြာသေးခင်ကိုကင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲမှု Sinha R. ကြိမ်နှုန်းမူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုမှဆက်စပ်တုံ့ပြန်မှုသက်ရောက်သည်။ Psychoneuroendocrinology (2005) 30: 880-9110.1016 / j.psyneuen.2005.05.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
247 ။ Moran အဘိဓါန် Santa မာရီယာဟာ MM, et al McRae-Clark က AL, Back ကို SE, DeSantis သည် SM, Baker NL, Spratt ဥပမာ။ CRH မှ pituitary-adrenal ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုနှင့် Trier လူမှုရေးဖိအားအပေါ်ကိုကင်းမှီခိုနှင့်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Psychoneuroendocrinology (2010) 35: 1492-50010.1016 / j.psyneuen.2010.05.001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
248 ။ Potenza MN, ဟောင်ကောင် Ka, Lacadie CM, Fulbright RK, Tuit KL, Sinha R. ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်: လိင်နှင့်ကိုကင်းမှီခို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (2012) 169: 406-1410.1176 / appi.ajp.2011.11020289 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
249 ။ Preston KL, Epstein DH ။ ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူနေ့စဉ်အသက်တာ၌စိတ်ဖိစီးမှု: ခံစားချက်မှကြားဆက်ဆံရေး, တဏှာ, relapse အစပျိုးခြင်းနှင့်ကင်းအသုံးပြုခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) (2011) 218: 29-3710.1007 / s00213-011-2183-x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
250 ။ Sinha R ကို, Catapano D ကို, ကိုကင်းမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် O'Malley အက်စ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) (1999) 142: 343-5110.1007 / s002130050898 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
251 ။ Hyman သည် SM, Fox က H ကို, ဟောင်ကောင် KI, Doebrick ကို C, Sinha R. စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် naltrexone ကုသမှု opioid-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေး-cue-သွေးဆောင်တဏှာ။ Exp Clin Psychopharmacol (2007) 15: 134-4310.1037 / 1064-1297.15.2.134 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
252 ။ Moore က TM, Seavey တစ်ဦးက, Ritter K ကို McNulty JK, ဂေါ်ဒွန် KC, Stuart GL ။ တဏှာ၏သက်ရောက်မှု၏ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုစဉ်အတွင်း relapse များအတွက်အန္တရာယ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Psychol စွဲပြုမူနေ (2014) 28 (2): 619-2410.1037 / a0034127 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
253 ။ Paliwal P ကို, Hyman သည် SM, Sinha R. တဏှာကင်း relapse ဖို့အချိန်ခန့်မှန်းထားသည်: အကိုကင်းတဏှာမေးခွန်းလွှာ၏ယခုအကျဉ်းဗားရှင်း၏ထပ်မံအတည်ပြု။ 2008-93 / j.drugalcdep.252 [: မူးယစ်ဆေးအရက် (910.1016) 2007.10.002 ပြုမှPMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
254 ။ et al Versace က F, Lam CY, Engelmann JM, ရော်ဘင်ဆင် JD, Minnix ဂျာဘရောင်း VL ။ cue reactivity ကို ကျော်လွန်. : သာယာသောလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေရေရှည်ဆေးလိပ်သောက် abstinence ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ စှဲလမျးသူ Biol (2012) 17: 991-100010.1111 / j.1369-1600.2011.00372.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
255 ။ et al Versace က F, Engelmann JM, ရော်ဘင်ဆင် JD, Jackson က EF, အစိမ်းရောင်အီး, Lam CY ။ သာယာသောတွေကိုနှင့်စီးကရက်-ဆက်စပ်တွေကိုမှ Prequit FMRI တုံ့ပြန်မှုဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းရလဒ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ နီကိုတင်းတောဘ Res (2014) 16: 697-70810.1093 / ntr / ntt214 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
256 ။ Papachristou H ကို, Nederkoorn ကို C, Havermans R ကို, Bongers P ကို, Beunen S ကိုရို Impulse နှင့်ဒီထက်ထိရောက်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ Jansen အေအဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်အရက်-မှီခိုလူနာအတွက်အရက်ပိုမိုပြင်းထန်သော cue-ရူးနှမ်းတဏှာဆက်စပ်နေကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) (2013) 228: 641-910.1007 / s00213-013-3063-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
257 ။ Papachristou H ကို, Nederkoorn ကို C, Giesen JCAH, Jansen အေ Cue reactivity ကိုဆေးကုနေစဉ်မဟုတ်, Impulse, အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်ကုသမှုပြီးနောက်ကနဦးချုံးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ (2014) 39: 737-910.1016 / j.addbeh.2013.11.027 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
258 ။ Koob gf ။ အရက်: allostasis နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။ အရက် Clin Exp Res (2003) 27: 232-4310.1097 / 01.ALC.0000057122.36127.C2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
259 ။ McDougle CJ, Black က je, Malison RT ကို, Zimmermann RC, Kosten TR, Heninger ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, et al ။ စွဲထဲမှာကိုကင်းသုံးစွဲမှုပြတ်တောက်စဉ်အတွင်း Noradrenergic dysregulation ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု (1994) 51: 713-910.1001 / archpsyc.1994.03950090045007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
260 ။ Stine သည် SM, Grillon CG, မော်ဂန်, CA, III ကို, Kosten TR, Charney DS, Krystal JH ။ Methadone လူနာသွေးကြောသွင်း yohimbine ပြီးနောက်တိုးမြှင့်ထိတ်လန့်နဲ့ Cortisol တုံ့ပြန်မှုပြ။ Psychopharmacology (Berl) (2001) 154: 274-8110.1007 / s002130000644 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
261 ။ Stine သည် SM, Southwick သည် SM, Petrakis IL, Kosten TR, Charney DS, Krystal JH ။ opioid-မှီခိုလူနာ Yohimbine-သွေးဆောင်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စိုးရိမ်သောကရောဂါလက္ခဏာတွေ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု (2002) 51: 642-5110.1016 / S0006-3223 (01) 01292-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
262 ။ Krystal JH, ဝက်ဘ်ကအီး, Cooney NL, Kranzler HR, Southwick SW, Heninger ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, et al ။ အရက်ထဲမှာ Serotonergic နှင့် noradrenergic dysregulation: မီတာ-chlorophenylpiperazine နှင့်မကြာသေးမီက detoxified အရက်သမားနှင့်ကျန်းမာနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအတွက် yohimbine ဆိုးကျိုးများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု (1996) 153: 83-92 [PubMed]
263 ။ Krystal JH, ဝက်ဘ်ကအီး, Grillon ကို C, Cooney N ကို, Casal L ကို, မော်ဂန်, CA, III ကို, et al ။ yohimbine ခြင်းဖြင့်မော်ဂျူနှင့်မီတာ-chlorophenylpiperazine (mCPP): မကြာသေးမီက detoxified အစောပိုင်းစတင်ခြင်းအထီးအရက်သမားအတွက် acoustic ထိတ်လန့် hyperreflexia ၏သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) (1997) 131: 207-1510.1007 / s002130050285 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]